(No. 18, April 17, 2020)
၁။ AA ကို မတရားအသင်း ကြေညာတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် တခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအပေါ်သတိပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း IKO ပြော
၂။ မြစ်ကြီးနားမှာ စားသောက်ကုန် ဝေတဲ့အစီအစဉ် လူစုလူဝေးကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း
၃။ တောင်ကြီး ဂေါက်ကွင်း အဝင်တွင် အမျိုးသားတဦး သေဆုံး
၄။ ပလက်ဝမြို့ခံလူထုနှင့် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ရိက္ခာဆန် ပို့ဆောင်မရ ဖြစ်နေ
၅။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဈေးရောင်းရမည့် အချိန်များ ထပ်မံ ပြောင်းလဲ
၆။ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသဖြင့် တီးတိန်မြို့ LockDown ချမချ အခြေအနေကြည့်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆို
၇။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် Mask မတပ်သူများအား အပြစ်ပေးမှုများလုပ်နေ
၈။ ဝိုင်းမော်ကျေးရွာအချို့တွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီသို့ နေ့စားသွားခြင်းမပြုရန် အမိန့်ထုတ်
၉။ မောင်တောမြို့တွင် ရိုးရာအစဉ်အလာမပျက် နံ့သာသွေး၍ မြို့တွင်းလှည့်လည် ဘုရားရေသပ္ပါယ်
၁၀။ တီးတိန်ဆေးရုံမှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများကို ကလေးမြို့ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့လျင် တားဆီးမည်ဟု မြို့လူထုက ကြေညာ
၁၁။ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်တချို့ လျှပ်စစ်မီး ပြန်မရသေး
၁၂။ မိုင်းဆတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဈေးများအားလုံး ယာယီပိတ်ထားမည်
၁၃။ ဘားအံဆေးရုံကြီးရှိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈ ဦး ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ
၁၄။ တောင်ကြီးမြို့ရှိ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံတွင် Hospital Quarantine ထားရှိခြင်းကို နယ်မြေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခန့်က ကန့်ကွက် ကြ သဖြင့် လူစုလူဝေးဖြစ်ကာ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများမှ လူစုခွဲရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ
၁၅။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်
၁၆။ လူနာအမှတ်စဉ် ၆၃ ၏ စက်ရုံမှပြန်လာသူကို မြစ်ကြီးနား မန်ခိန် နေအိမ်တွင် Home Quarantine လုပ်ထား
၁၇။ ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ စစ်တွေကမ်းခြေကိုပိတ်
၁၈။ AA နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ သတင်းသမားတချို့တိမ်းရှောင်နေရဆဲ
၁၉။ လူနာအမှတ်စဉ် ၈၂ ဖြင့်ထိတွေ့ခဲ့သော မြစ်ကြီးနားမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆေးရုံသတ်မှတ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ထား
၂၀။ မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၌ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက် အပြည့်အဝရရှိရေး ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၆ ဖွဲ့ တောင်းဆို
၂၁။ ARSA ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ကျဆုံးဟု တပ်မတော်ပြော
၂၂။ ဖလမ်းမြို့အနီး အင်အားအနည်းငယ်ရှိ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေစိုက်နေသည့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)ကို မတရားအသင်းကြေညာပြီး ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေမှု များသည် တခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ( EAOs)ကို သတိပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ် ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကရင်အဖွဲ့အစည်း – IKO က ယနေ့ (ဧပြီ ၁၄ရက်) သဘောထားထုတ်ပြန်၍ ပြောဆိုလိုက်သည်။ ရက္ခိုင့် တပ်တော် (AA) သည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး စတင်ဆွေးနွေးစဉ်ကတည်းက ပါဝင်လာခဲ့သော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေသော ကာလဖြစ်သလို AA အပေါ်သဲကြီးမဲကြီး ထိုးစစ် ဆင် တိုက်ခိုက်နေခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသော အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်ရေးကို အ နှောင့်အယှက်ဖြစ် စေပြီး အစိုးရ၊ တပ်မတော်၏ သဘောထားများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့ဆက်ရန် အခက်ကြုံနေရကြောင်း IKO က ဆိုသည်။
IKO ပြောခွင့်ရ စောဇော်နောင်က “ရခိုင်တပ်မတော်ကို မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာပြီး ထိုးစစ်ဆင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စက NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ မတရားအသင်းဖျက်သိမ်းခံရတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်း တွေကိုလည်းပဲ ဗမာ့တပ်မတော်က လိုအပ်လာရင် အချိန်မရွေး မတရားအသင်းအဖြစ်နဲ့ ကြေညာနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့က သုံးသပ်တယ်။ ပြောချင်တာက မနာခံဘူးဆိုရင်တော့ ရခိုင်လိုပဲ မင်းတို့လည်း ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၃ရက်နေ့က ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA)နှင့် ၎င်းအဖွဲ့၏ လက် အောက်ခံ အဖွဲ့များကို အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (၂)ပါ အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက်များနှင့်အညီ မတရားအသင်း အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပုဒ်မ ၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ AA အဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြင့် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ချင်းပြည် နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် AA နှင့် တပ်မတော် တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ လုပ်ရပ်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအပြင် တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့မှ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားချိန် တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် တစ်နိုင်ငံ လုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုကို ကြေညာရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/04/aa%e1%80%80%e1%80%af%e1% 80%ad-%e1%80%99 %e1%80%90%e1
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဦးလဆန်အောင် (ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့)က လူထုကို ဆန်၊ ဆီ နဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဒီနေ့ လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် လူတစ်ထောင်ခန့် စုဝေးလာခဲ့တာကြောင့် လှူဒါန်းခြင်း ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဗလမင်းထင် တံတားနားမှာ ဒီမနက် ခုနှစ်နာရီကစပြီး မြစ်ကြီးနားနဲ့ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်က ဒေသခံတွေက အခြေခံ စားသောက်ကုန်တွေ ဝေမှာကို လာရောက်တန်းစီခဲ့ကြတာပါ။ တဖြည်းဖြည်းလူများလာပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်လာတဲ့အတွက် လှူဒါန်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီး ရပ်ကွက်အလိုက် နေထိုင်သူစာရင်း ကောက်ယူမှုကို အရင် ပြုလုပ်မယ်လို့ အလှူ မှာ ကူညီပေးနေတဲ့ ဦးခင်မောင်ပြုံးက ပြောပါတယ်။ မအားတဲ့ကြားကနေ အချိန်ပေးပြီး လာရောက်တန်းစီခဲ့ပေမယ့် မရခဲ့ တဲ့အတွက် မကျေမနပ် ဖြစ်မိတယ်လို့ ရမ်ပူကွက်(၁) က လာထုတ်တဲ့ ဒေါ်မြင့်မြင့်က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့မနက်က ပေးဝေမယ့် အစီအစဉ်မှာ အလှူရှင်က ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဦးလဆန်အောင် (ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့) ဖြစ်ပါ တယ်။ လူတစ်ဦးကို ဆန် သုံးပြည်၊ ဆီတစ်ဗူးနဲ့ နှာခေါင်းစည်းငါးခု ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အလုပ်တွေနား ထားရလို့ ဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန် လှူဒါန်းပေးတယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာပြီး လာတန်းစီခဲ့ပေမယ့် မရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ကြောင်း ဦးစိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် အခုလို လူစုလူဝေးမလုပ်ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကနေတစ်ဆင့် စနစ်တကျ စီစဉ် သင့်တယ်လို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထွယ်ဂျန်ဒါ အဖွဲ့က ဒါရိုက်တာ ဒေါ်နန်ပူက ထောက်ပြပါတယ်။ အစိုးရက လည်း ရောဂါကာကွယ် တားဆီးနိုင်ဖို့ လူစုလူဝေးတွေမလုပ်ကြဖို့နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်အပြင် မထွက်ကြဖို့ သတိပေးထားပါ တယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/myitkyina-food-disrtibution-postpone–04142020071519.html
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ ဂေါက်ကွင်းအဝင်ပေါက်တွင် အမျိုးသားတဦး သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ဂေါက်ကွင်းအဝင်ပေါက် အနီး မိုင်တိုင် ၁၁၆/၆ ဘေးမြောင်းထဲတွင် ယနေ့ မနက် ဧပြီ ၁၄ ရက်တွင် တွေ့ရှိကြောင်း တောင်ကြီးမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ တဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။ “ သေဆုံးသူက သက်လတ်ပိုင်း အရွယ်ပါ။ ဘာကြောင့် သေလဲဆိုတာတော့ အတည်ပြုလို့ မရသေးဘူး။ ခု သေဆုံးမှုက ပြင်ပဒဏ်ရာ မရှိဘူး” ဟု ၎င်းရဲအရာရှိ က ဆိုသည်။ သေဆုံးသူ အလောင်းသည် ရင်ခွဲရုံတွင် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပဒဏ်ရာ မရှိလျှင် သေမှု သေခင်း နှင့် ဓမ္မတာ သေ ဆုံးမှု ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲအရာရှိ က ထပ်လောင်းပြောသည်။
ထို အမျိုးသား သေဆုံးသည့်နေရာကို တောင်ကြီး ပရဟိတ အဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ဆေးများ ချက်ချင်း သွားရောက်ဖြန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ လူတယောက် ဂေါက်ကွင်းအဝင်ပေါက်ရဲ့ မြောင်းထဲမှာ သေနေတာကြားတော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ ချက်ချင်း ဆေးသွားဖြန်းပေးလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့် သေလည်းတော့မသိဘူး” ဟု ဆေးသွားဖြန်းသည့် ကိုဝင်းနိုင်စိုးက ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများနေသည့် အချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသေဆုံးသူသည် မည်သည့်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားသည်ကို တောင်ကြီးဒေသခံများမေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16150
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) အကြား စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်ကာ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်နေသည့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့ ပြည်သူများနှင့် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ချင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများက ရိက္ခာဆန်များပို့ဆောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း အခက်အခဲရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ပလက်ဝသို့ ပို့မည့် ရိက္ခာဆန်များ ဆမီးမြို့သို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်သော်ငြား ရှေ့ခရီးဆက်ရန် ကားသမားများ မဝံ့ရဲသောကြောင့် အခက်ကြုံနေကြရခြင်းဖြစ်သည်။ “အဓိကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တပ်ကလည်းလုံခြုံရေး သူတို့ပေး မယ်။ ဒါပေမဲ့ကားသမားတွေကမသွားရဲတော့ဘူး။ အဓိကပြဿနာက ကားသမားတွေမသွားရဲတာ။ အဲဒီတော့ ကားသမားတွေ ဘာကြောင့် မသွားရဲတာလဲဆိုတော့ သူတို့မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ ဟိုတလောကလည်း ကားမီးရှို့လိုက်တာတို့၊ ဆန်အိတ် လုသွားတာတို့၊ အဲလိုဖြစ်တော့ သူတို့ကအစိုးရခွင့်ပြုတာတောင်မှ သူတို့မသွားရဲဘူး။ တပ်ကလုံခြုံရေးပေးမယ်လို့ပြောရင်တော့ ပိုတောင်ကြောက်တာပေါ့ဗျာ၊ ဆိုတော့ အဲဒီအနေအထား” ဟု ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်ဝန်ကြီးဟောင်း ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်က ပြောသည်။
ချင်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာဆန်များ သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် Chin Relief-rehabilitation and Community Development Foundation (CRCDF) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Chinland Herald သတင်းစာအယ်ဒီတာ ဆလိုင်းငယ်ပီက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပလက်ဝမြို့အထိ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေ မပေးသောကြောင့် ဆမီးမြို့တွင် ရိက္ခာများထားခဲ့ပြီး ပြန်လှည့်လာခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။ ရိက္ခာများ လက်ရှိနေရာမှ ဆက် လက်ပို့ဆောင်ရေး စရိတ်စကပါမကျန် စီစဉ်ထားရစ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောပြသည်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ တိုးလာဆဲဖြစ်ပြီး ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် ၃ ထောင်ကျော်ရှိကာ ဆမီးမြို့ပေါ်တွင်လည်း ၃ ထောင် နီးပါး ရောက်ရှိနေကြသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72252
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရစည်ပင်ဈေးနှင့် ကျေးလက်ဈေးများကို နံနက် ၅ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိသာ ဖွင့်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ယနေ့ ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခင်က နံနက် ၅ နာရီမှ ၁၀ နာရီ၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်သူများအားလုံး နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင် ရမည်ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
မြစ်ကြီးနားရှိ လူထူထပ်သော ရွှေညောင်ပင်ရပ်ကွက် ဝက်ကုန်းဈေးတွင် ဧပြီလ ၁၅ရက်နေ့မှစကာ တစ်ဦးလျှင် ၆ပေအကွာ ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟုလည်း ရွှေညောင်ပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်း ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ကတော့ နေ့တိုင်း ဈေးဝယ်လာတဲ့သူတွေ၊ ဈေးရောင်းမယ့်သူတွေကို Mask တပ်ဖို့ Hand Speaker နဲ့နေ့တိုင်းအော်ပြောပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ခု ပြည်နယ် အစိုးရကလည်း ထပ်ပြီးထုတ်ပြန်လာတဲ့တွက်ကြောင့်မို့ နက်ဖြန်ကစပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၆ ပေ အကွာမှာ ရောင်းချနိုင်ဖို့တွက် စီစဉ်နေပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
“ဘာမှလိုက်နာတာမတွေ့ရဘူး။ ကျမတို့မှာတော့ Stay at Home သာလုပ်တာ အိမ်ရှေ့မှာ မနက်မနက်ဆိုရင် ဈေးလာဝယ်တဲ့ သူတွေကလည်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားတာလည်းမတွေ့ရဘူး။ ပြီးတော့ တစ်ချို့ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေထိုင်ပြီး စောင့်နေတဲ့ သူတွေကလည်း ချောင်းဆိုးတဲ့လူနဲ့ နှာချေတဲ့သူနဲ့ ကျမအိမ်က ဈေးကပ်ရပ်ဖြစ်နေတော့ ပိုကြောက်ရတယ်။ ဈေးသည်တွေ ကလည်း နှာခေါင်းစည်းတပ်တာမတွေ့ရဘူး။ ကျမတို့ကသာ ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်စိုက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုက အဲလိုဖြစ်နေရင် နေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူး။ အားလုံး အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကာကွယ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ ဝက်ကုန်းဈေးသည် ရွှေညောင်ပင်၊ ကျွန်းပင်သာ၊ အေးစေတီ စသည့် ရပ်ကွက် ၃ ခုမှ ပြည်သူများ ရောင်းဝယ်နေသည့် ဈေးဖြစ်သည်။ အလားတူ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း အခြားရပ်ကွက်များရှိ မနက်ဈေးများတွင်လည်း လူထူထပ်နေပြီး ရောဂါကူးစက် လွယ်သောကြောင့် နေရာကျယ်ပြီး ဈေးသည်တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ၆ ပေခန့်အကွာရောင်းချနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှ စီစဉ်ပေးသင့်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိနေကြသည်။ https://bu rmese.kachinnews.com/2020/04/14/%e1%80%80 %e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%84%e1
ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေး အတည်ပြုလူနာ ၃ ဦး အထိရှိနေသည့် တီးတိန်မြို့ LockDown ချမချကို လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသဖြင့် နယ်မြေအခြေအနေကြည့်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက် က ပြောသည်။
“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကို LockDown လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရေ၊ မီး လုံလောက် ဖို့ရယ်၊ တခြားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာပြည့်စုံဖို့ စတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကို တစ်မြို့လုံး လုံလောက်အောင်လုပ်ဖို့က မလွယ်ဘူးပေါ့နော်”ဟု စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ကို Lian Tuang က “အစိုးရဘက်က LockDown ချဖို့ ဒီချိန်ထိ ဘာမှမလုပ်သေးတာ။ ကျနော်ပြောချင်တာက စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးလို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီဒေသတစ်ခုကြောင့် အားလုံးအတွက် ဒုက္ခမရောက်အောင် ကျနော်တို့က ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသင့်တယ်လို့ ယူဆတယ်၊ တီးတိန်ကို အဲလိုလုပ်ထားပြီဆိုရင် အဘက်ဘက်ကအလှူရှင်တွေ ပြည်သူတွေ အားလုံးပံ့ပိုးပြီးတော့ မငတ် လောက်ပါဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆတယ်”ဟု ပြောသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံနေရသည့် သုံးဦးကို အခြေအနေအရ အခြားနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းမည်မဟုတ်ဘဲ တီးတိန်ဆေးရုံတွင် ဆက်လက်ကုသမည်ဖြစ်ပြီး ကူးစက်ခံရသူပိုများလာမှသာ ဖလမ်းနှင့် ဟားခါးဆေးရုံကြီးတို့တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72258
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း၌ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများနှင့် နယ်ခံများ ပူးပေါင်းကာ စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများကို ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ တုတ်ဖြင့် ရိုက်ခြင်းစသည့် အပြစ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်တွင် ပြန့်နှံ့လာသည်။ ကလောမြို့နယ်၊ ဟဲဟိုးတွင် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီအချိန်မှစပြီး ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ဒေသခံများပူးပေါင်းကာ Mask မတပ်ပဲ အပြင်ထွက်လာသူများအား တုတ်များကိုင်၍ အပြစ်ပေးမည် ဟုဆိုကာ လမ်းပေါ်တွင် တုတ်ကိုင်စောင့်နေသည့် ဓါတ်ပုံများ လူမူကွန်ရက်တွင် ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။
ဟဲဟိုးဒေသခံ မောင်ကျော်သန်း က “အပြင်ထွက်လာတဲ့သူတွေ Mask မတပ်ရင် ရိုက်မယ်ဆိုပြီး သူတို့က တုတ်ကိုင်စောင့်နေ တော့ ကျနော်တို့လည်း ကြောက်တာပေါ့။ သူများတွေကြည့်လိုက်တော့ ရီပြီး ထွက်သွားကြတာ တွေ့တာပဲ။ ကျနော်တို့ကိုတော့ Mask တပ်ဖို့ သတိပေးတယ်။ အိမ်မှာဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုနေ ရမယ်ဆိုတာပြောတယ်ပေါ့။ တကယ်မရိုက် ပါဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထို့အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟဲဟိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်အား မေးမြန်းရာတွင် ဟဲဟိုးပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် covid- 19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှ ပြန်လည်ဖြေရှင်း ပေးထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဟဲဟိုးပြည်သူ့ဆေးရုံ က “ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှ စလုပ်တာပါ။ ဒါကလည်းလတ်တလော ဟဲဟိုး မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စိတ်ပူစရာ ကိစ္စတွေကြောင့် အုပ်ကြီးများနှင့် အများအရေး ကူညီကြသူများ စုပေါင်းပြီး လုပ်ကြတာပါ။ မေးကြည့်ပါ တကယ်အရိုက်ခံရသူရှိလားဆိုတာ ဘယ်သူမှမရိုက်ပါဘူး။ အားလုံးကို ပိုမို ဂရုစိုက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့မို့ လုပ်ကြ တယ်လို့မှတ်ယူပေးပါဗျ။ လာကြည့်ကြည့်ပါ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘဲ ပျော်စရာကြီး ဖြစ်နေတာပါ” ဟု ရေးသားထားသည်။
ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နမ့်လန်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ရွာကလူတွေက ပြောစကားနားမထောင်ဘူး။ ဒီဘက်မှာက ပြည်တော်ပြန်တွေ အရမ်းများတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်း မရှိဘူး။ သူတို့ကို ဘယ်လိုပဲ မေတ္တာရပ်ခံတယ် ပြောပြော ဘာပြောပြော ဂရုကို မစိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ဒီလိုလေး လုပ်ခိုင်းတာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/16/220712.html
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် စန်းကားကျေးရွာအုပ်စုရှိ တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီသို့ နေ့စားသွားခြင်း မပြုလုပ်ရန် ကျေးလက်အုပ်ချုပ်ရေး ရုံးမှ ညွန်ကြားထားကြောင်း စန်းကားကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိသော် လည်း ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အရ လက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် Covid-19 ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်တွက် ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒေါင်ခေါင် ပြောသည်။
“ကုမ္မဏီမှာ နေ့စားမသွားရဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြားကနေ သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပထမတစ်ခေါက် ဒုတိယတစ်ခေါက် သတိ ပေးတာတွေလုပ်မယ်။ တတိယအကြိမ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ငွေဒဏ်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်။ ခုဘယ်ရပ်ကွက်က သွားတယ်မသွားဘူးဆိုတာကို ရပ်ကွက်ကနယ်မြေမှူးတွေကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်။ အားလုံးက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရောဂါ ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်တွက်ဖြစ်တယ်။” ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒေါင်ခေါင် ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဝိုင်းမော်ဘက်လာရောက်သူများအား မိုင်းနားကျေးရွာအဝင် တိုးဂိတ်တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမူများ ပြုလုပ် ပေးပြီး မုတ်လွှဲလမ်းဆုံနားတွင်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်သည့် စစ်ဆေးမူများပြုလုပ်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း စန်းကားကျေးရွာအတွင်းသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် နေ့စားသမားများသည် ခတ်ချိုကူးတို့ဆိပ်မှ စက်လှေဖြင့် ကူးလာသူများဖြစ်သည့်တွက် စိုရိမ်ရကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ စန်းကားကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိကာ ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၁ ခုရှိပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၀၀ ထောင်ခန့်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သိရသည်။
လူစုလူဝေးဖြစ်ခြင်းနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်သမားများ ဈေးလာဝယ်ခြင်းတို့ကြောင့် စန်းကားဈေးကိုလည်း ပိတ်ထားသည် ဟု သိရသည်။ စန်းကားကျေးရွာရှိ ပြည်သူအများစုသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း တရုတ်ကုမ္မဏီဝင် လာပြီးနောက် လယ်ယာမြေများကို ငှားရမ်းထားကြသည်ဟု သိရသည်။ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့မှစကာ စန်းကားကျေးရွာတွင်းသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သုံးဘီးနဲ့ဖြစ်စေ ရွာတွင်းသို့ ဈေးလာရောက်ရောင်းချခြင်းအား တားမြစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့မှာ သင်္ကြန်ကာလ မြို့ရဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာအရ နံ့သာသွေးပြီး ဧပြီ ၁၄ ရက် မနက်ပိုင်းက ကား တွေနဲ့ မြို့တွင်းလှည့်လည် ဘုရားရေသပ္ပယ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားရေးသပ္ပါယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ ကား ၃ စီးကို မောင်တောမြို့နယ် ရဲ့တပ်ဖွဲ့က မနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲလောက်မှာ ဖမ်းဆီးကာ အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကို ခေါ်ယူကာ ဝန်ခံချက် လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် ခေတ္တမြို့နယ်မှူး ဒုရဲမှူးမြင့်ဆွေက “သူတို့ကို နိုင်ငံတော်က COVID-19 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ တွေကိုရှင်းပြပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မလုပ်ဖို့ ကတိခံဝန်ချက်လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေ နဲ့ပေါ့နော် နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ အရေးယူတာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
မောင်တောမြို့ခံ မမေလိုဒီက “အခုက လျှပ်စစ်မီးလည်း မရဘူး။ အက်တာနက်လည်း မရတော့ ဒီကလူတွေက ဘာသတင်းမှ မကြားရဘူး။ သတင်းတွေမကြားရတော့ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ နေမြဲတိုင်းနေ စားမြဲတိုင်းစားပေါ့ ဒီအတိုင်းပဲ နေထိုင်ကြတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမှာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူလည်း မရှိဘူး။ သေဆုံးတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရိုးရာ အစဉ်အလာအရ ဘုရားရေးသပ္ပါယ်တာတို့ ဘာတို့ရှိတယ်။ ကျမတို့ ဆိုရင်လည်း နေတိုင်း ဆိုင်ဖွင့်သလိုမျိုး ဖွင့်နေကြတာပါပဲ။ ထွေထွေထူးထူး စိုးရိမ်စရာတော့ မတွေ့မိပါဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
မောင်တောမြို့မှာ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးတိုက်တွန်းတာတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ မောင်တောမြို့နယ် ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းနိုင် ကတော့ ပြောပါတယ်။ အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ တော် စစ်တွေမြို့တွေမှာလည်း ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ နံ့သာသွေးတာ၊ ဘုရားရေသပ္ပါယ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ မြို့ခံတွေထံက သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/382569
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေသော COVID-19 လူနာများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့ ဆေးရုံ ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသမည့်အစီအစဉ်ကို ကလေးမြို့လူထုက လက်မခံကြောင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလာပါက တားဆီးပိတ်ပင်သွား မည်ဟု ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ကလေးမြို့ မြို့မိမြို့ဖများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အသင်း အဖွဲ့များက အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးနောက် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
” ယခုအချိန်တွင် ကလေးမြို့တွင် ကိုဗစ် (၁၉) ရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေချိန် အဆိုပါ ကိုဗစ် (၁၉) ကူးစက်လူနာများအား ကလေးမြို့ဆေးရုံကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသခြင်းကို မြို့လူထုက လုံးဝ (လုံးဝ) လက်မခံပါကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။” ဟု ပါရှိသည်။ ” အဆိုပါ ကိုဗစ် (၁၉) လူနာများအား ချင်းပြည်နယ် ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးတွင် ရွှေ့ပြောင်းကုသခြင်းသာလျှင် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ အကယ်၍ ဝေဘာဂီကူးစက်ဆေးရုံသို့ ရွှေ့ပြောင်းကုသလျှင် ကလေးမြို့လူထုက ကုန်ကျစရိတ် ထောက်ပံ့ပါမည်။” ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အစောပိုင်းက တီးတိန်ဆေးရုံမှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများကို ဖလမ်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရန်လည်း ကန့်ကွက်ထားသည်ဟု သိရသည်။ တီးတိန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကိုဗစ် (၁၉) လူနာ သုံးဦး တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေရသည်။ တီးတိန်ဆေးရုံတွင် လူနာများကုသရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများလိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ http:// www.mizzima burmese.com/article/68977
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်တွေ ဧပြီလဆန်းပိုင်းကတည်း မီးမရရှိတဲ့အခြေအနေကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုသက်နိုင်က ပြောပြမှာပါ။ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောမြို့နယ်တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလအစောပိုင်း လောက်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဓာတ်ကြိုးတွေ ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာပါ။ လျှပ်စစ်ဌာနက ပြင်ပေးမယ်လို့ပြောမဲ့ ခုအချိန်အထိ မီးမရရှိသေးဘူးလို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးခင်မောင်လတ် က ပြောပါတယ်။
“ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အဲဒီဘက်ကျ ကျေးရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ကြိုးတွေ မီးတိုင်တွေ ထိခိုက် သွားတာရှိတယ်။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနကပြောတယ်။ သူတို့က ပြင်ဖို့တော့ ကြိုးစားနေတယ် ဒါပေမဲ့ တိုက်ပွဲက လည်း နေ့စဉ်လိုလို ဖြစ်နေတော့ အဆင်မပြေသေးဘူး။ တိုက်ပွဲရပ်နားသွားတဲ့ အခါသူတို့ ကြိုးစားပြီးပြင်ပေးမယ် လို့တော့ သူတို့က ပြောပါတယ်။ “ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာလည်း အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အပြင် လျှပ်စစ်မီးပြတ် တောက်နေ တာကြောင့် အခုလက်ရှိ ကူးစက်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သတင်းအချက်အလက် ရယူဖို့ ခက်ခဲနေကြတယ် လို့ ဘူးသီးတောင် ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။
“မီးပျက်တာကတော့ ကျနော်တို့ ၁၅ ရက်လောက်တော့ ရှိပြီ။ လက်နက်ကြီးကျလို့ မီးပျက်သွားတာလို့တော့ ကြားတယ်။ အစိုးရက တရားဝင် အကြောင်းကြားတာတော့ မရှိဘူး။ မီးမလာတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပေါ့။ မီးမရတော့ ကျနော်တို့ TV တွေကြည့် မရတော့ဘူး။ ဒီဘက်မှာက TV မှာ လာတဲ့ သတင်းတွေကိုပဲ ကြည့်နေရတာလေ။ အခုက သတင်းတွေလည်း ကြည့်မရ တော့ဘူး။”
ရသေ့တောင် ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောမြို့နယ်တွေကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေကို ပြန်ဆက်ဖို့ အတွက် အဲဒီဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ သွားရောက် လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲနေ တယ်လို့ မဟာဓာတ်အားလှိုင်းတာဝန်ခံ ဦးသိန်းရွှေက ပြောပါတယ်။ “ရှိတယ်၊ ရှိတယ် ဟိုမှာက စစ်တပ်က ပိတ်ထားတယ်။ အဲမှာ စစ်ဆင်ရေး နယ်မြေဖြစ်နေတော့ တိုက်ပွဲတွေလည်း ည ဖြစ်နေတော့ အဲမှာသွားလို့၊ လာလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။” ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက လက်ရှိ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေတဲ့ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောအပါအဝင် မြို့နယ် ၈ ခုလောက်ကို အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်း ဖြတ်တောက်ထားကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ နေရသလို သတင်းအချက်အလက်တွေ ရယူဖို့လည်း ခက်ခဲနေကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-electric /5374538.html
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် COVID-19 ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက ဧပြီ ၁၆ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ခရိုင်အတွင်းရှိဈေး ၈ ဈေးကို ၄ ရက်ကြာ ပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်းဆတ်ခရိုင် ခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနေမျိုးအောင်က “ခရိုင်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဖို့ လူစုလူဝေး ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဈေးအားလုံးကို မနက် ဖြန် ကစပြီး လေးရက်ကြာ ပိတ်ပင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရွာအလိုက် ယာဉ် အသွားအလာတွေကိုလည်း ပိတ်ပင်သွားမှာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။
မိုင်းဆတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၂ ခုနဲ့ မြို့နယ်ခွဲတခုမှ အထင်ကရဈေးရှစ်ခုဖြစ်တဲ့ မိုင်းဆတ်မြို့မဈေး၊ ကုန်းကုလားဈေး၊ မိုင်းတွမ်းဈေး၊ ယောင်ခဈေး၊ မိုင်းခုတ်မြို့မဈေး၊ မိုင်းတုံမြို့မဈေး၊ ပုံပါကျင်မြို့မဈေး၊ နားကောင်းမူး ဈေးတွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ပိတ်ပင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်အားလုံးကို ည ၇ နာရီကနေ နောက် တနေ့မနက် ၇ နာရီ အထိ အသွားအလာပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုမရှိပါက ဥပဒေအရအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ http://b urmese.dvb. no /archives/382565
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဧပြီ ၁၃ ရက်ညက နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈ ဦးမှာ ဓာတ်ခွဲတွေ့ရှိချက်အဖြေအရ COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရဘူးလို့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဘရန်အောင်က ပြောပါတယ်။ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈ ဦးဟာ ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းကဖြစ်​ပြီး သီးသန့်ထားရှိပြီး စစ်ဆေးကုသမှုတွေ ပေးထားသလို စောင့် ကြည့်လူနာတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာသူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဘရန်အောင်က “​ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ လူနာမှန်သမျှ စစ်တယ်။ နိုင်ငံခြား ထွက်တဲ့သူတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကနေ့ ညက အဖြေထွက်တယ်။ Ngative ပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ စောင့်ကြည့်လူနာ အားလုံး မှာ ရောဂါပိုးမတွေ့ရလို့ ဆေးရုံကနေ ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အလားတူ မြဝတီဆေးရုံကြီးက စောင့်ကြည့်လူနာ ၂ ဦး၊ လှိုင်းဘွဲဆေးရုံကြီးက ၆ ဦး၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကော့ဘိန်း တိုက်နယ် ဆေးရုံက ၁ ဦးတို့ဟာလည်း ရန်ကုန် အမျိးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲဌာနက ပြန်လည်ပေးပို့တဲ့အဖြေအရ ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ ရ ဘူးလို့ ဧပြီ ၁၄ ရက်က ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives /38
၁၄။ တောင်ကြီးမြို့ရှိ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံတွင် Hospital Quarantine ထားရှိခြင်းကို နယ်မြေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခန့်က ကန့်ကွက်ကြ သဖြင့် လူစုလူဝေးဖြစ်ကာ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများမှ လူစုခွဲရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ရှိ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံတွင် Hospital Quarantine ထားရှိခြင်းကို နယ်မြေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခန့် က ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ကြသဖြင့် လူစုလူဝေးဖြစ်ကာ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများမှ လူစုခွဲရန် လာရောက်ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ တောင်ကြီးမြို့ ကံသာရပ်ကွက် နယ်မြေ ၃ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံတွင် COVID-19 Postive လူနာနှင့်အတူ လေယာဉ်စီးလာသူများအား လာရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းကို ယနေ့ (ဧပြီ ၁၅ ရက်) ည ၈ နာရီခန့်တွင် မေတ္တာရှင် ဆေးရုံတည်ရှိသော လမ်းဆုံ၌ လူစုလူဝေး အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လာရောက်၍ အချိန်တစ်နာရီခန့်ကြာအောင် ရှင်းလင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“ QC စင်တာ လ(၁၀) မှာ ထခွဲမှာ ရပ်ကွက်ရုံးရှေ့တည့်တည့်မှာ အထက်တန်းကျောင်းရှိတယ်။ ၁၄ ရက်ပြည့် လို့ ထွက်သွား သူလည်း ရှိသလို၊ နေထိုင်သူတွေလည်း ၆ ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ည ဖြစ်တာ လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များလို့ သိရတယ်။ ကွင်းဆက်လိုက်ရင်းနဲ့ FACILITY ပြည့်စုံစွာ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် မေတ္တာရှင်ဆေးရုံမှာ စောင့်ကြည့်ထား ပေး ဖို့ပေါ့။ အဲဒါကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး က နယ်မြေမှူးတွေကို ချမပြရကောင်းလား ဆိုပြီးတော့ နယ်မြေခံ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ ကနေ အတို့အထောင်လုပ်ချိန်မှာ လူစုလူဝေး နဲ့ မကျေနပ်လို့ ပေါက်ကွဲတယ်။ လက်မခံနိုင်ဘူး ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကံသာ က ကံဆိုးတယ်။ ဒီပြဿနာ ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်။ အပြန်အလှန်လေးစားမှု မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်။ နောက်ဆုတ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေ လုပ်တယ်။ ဒါကို ကွန်ပလိန်းတက်တာ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိရောက်လာတာ (၉) ယောက်ပေါ့။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီကိစ္စလေး ပေါ်လာတယ်။ ” ဟု ကံသာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်က ပြောကြားသည် ။
“မလိုက်နာဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဦးမယ်ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်တွေ ရွေးထားပြီးပြီ။ လုပ်သင့်တာကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမယ်။ Positive တွေ့သွားတဲ့ ခရီးစဉ် မှာ လေယာဉ်ပျံ အတူတူစီးခဲ့သူတွေကို FQ ထားတာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး တော့ လုပ်တာပေါ့။ အချက်အလက်တွေတော့ ယူထားပြီးပြီ။ ရဲလုံခြုံရေး တွေလည်း ချထားပြီးပြီ။ 26 နဲ့ ပါလာတာကတော့ တောင်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ ၈ ယောက် ရောက်နေတာတော့ ကြာနေပြီ။ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ထဲက ရောက်နေတာ၊ HQ ပဲ ဝင်နေ ကြတာ ကျန်းမာရေး အားလုံးကောင်းတယ်။ ” ဟု တောင်ကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးမင်းထိုက် က ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/arti cle/169365
ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ စုပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ ထားရှိဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ CHDN အဖွဲ့ရဲ့ Deputy Director (ပရိုဂရမ်) ဦးစိုးမိုးအောင်က ပြောပါတယ်။ “ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးထားတာတွေ ရှိတယ်”လို့ ဦးစိုးမိုးအောင်က ပြောပါတယ်။
ကရင်နီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူထုကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် ( Civil Health and Development Network – CHDN) အဖွဲ့ အနေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ သံသယရှိသူတွေကို တွေ့ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းမှုလုပ်မှာလဲ ဆိုတဲ့အချက်(၃)ချက်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး ဂိတ်(၂၉)ဂိတ်မှာ တွေ့ရှိတဲ့သံသယရှိသူတွေကို လွှဲပြောင်းရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အောက်ခြေအဆင့်မှ မြို့နယ်အဆင့်ထိ သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်ကို အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအထိ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
CHDN အဖွဲ့က ကရင်နီပြည်နယ်ရှိ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ (KNLP)၊ ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (KNPLF)၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)၊ ကရင်နီအမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း(KNSO)၊ ကယန်း ပြည်သစ်တပ်(KNG)၊ ကရင်နီအမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (KNPDP) အဖွဲ့တွေကနေပြီး စုပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ (၃) ဦး၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဆေးရုံတွင် သံသယ လူနာ (၁) ဦးတို့ ထပ်မံတက်ရောက်စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ခံလျက်ရှိတယ်လို့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကတဆင့် သိရပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72263
Covid-19 လူနာအမှတ် ၆၃ ၏ စက်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်ရာမှ ပြန်လာပြီး ယခု ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မန်ခိန်ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူအား Home Quarantine လုပ်ထားကြောင်း မန်ခိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။
“ရန်ကုန်ကနေ မန်ခိန်ကို ရောက်တာတော့ ဧပြီ ၂ရက်နေ့ ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ သူ့ပြောတာကတော့ အဲဒီလူနာအမှတ် ၆၃ နဲ့က ထိတွေ့မူ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒါသူတို့စက်ရုံက သူတို့ကလုပ်သားတစ်ယောက်။ ဟိုက သူဌေးပေါ့ အဲလိုပြောတယ်။ ကျနော် တို့ ဆီမှာတော့ ၁၀ ရက်နေ့မှ အကြောင်းလာကြားတာဖြစ်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလူနာအမှတ် ၆၃ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ သူဌေးနဲ့လုပ်သားဆိုတော့ လောလောဆယ်အခြေနေမှာ ထိတွေ့နိုင်မယ့်အခြေနေမရှိနိုင်ဘူး။ အဲကြောင့် ခုလောလောဆယ်တော့ Home Quarantine လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မန်ခိန် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဘက်ကနေ အဖျားတိုင်းတာတွေတော့ နေ့တိုင်း လိုလိုလုပ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ထိတော့ အေးဆေးပါဘဲ။” ဟု မန်ခိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလီဆီးဆိုက် ပြောသည်။
အဆိုပါ Home Quarantine ပြုလုပ်နေသူသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသည့်အတွက် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် အစီစဉ်မရှိသေး ကြောင်းနှင့် တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားမူရှိလာပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ကျန်းမာရေးသို့ အကြောင်းကြားကာ ဆက်လက် ဆောင် ရွက်သွားဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
“ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ ရောက်တာကို ဘာလို့ ၁၀ ရက်နေ့မှ အကြောင်းသွားကြားတာလဲမသိဘူး။ ရပ်ကွက်က လူတွေကတော့ ရောက်နေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီ ဆိုပြီးတော့ ပြောနေကြတယ်။ ဒီညတော့ ဒီရပ်ကွက်က လူတွေလည်း အားလုံးလန့်နေ ကြပြီ။ အဲကြောင့်မို့လားမသိ ဒီညတော့ Hand Speaker နဲ့လိုက်အော် အိမ်ထဲမှာနေဖို့ အပြင်မထွက်ဖို့လိုက်အော်နေကြပြီ” ဟု မန်ခိန်ဒေသခံတစ်ဦး ပြောသည်။ ထိုသူကို Home Quarantine ကာလပြည့်ပြီးသော်လည်း နောက်ထပ် ၇ ရက် ထပ်မံ စောင့်ကြည့်မည့်အကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/15/%e1%80%9c%e1% 80%b0%e 1%80%94%e1%80%ac%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီ လာရောက်အပန်းဖြေလေ့ရှိတဲ့ စစ်တွေကမ်းခြေကို မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဒီနေ့ပိတ်လိုက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားတွေကိုပါ အများအပြားချထားပါတယ်။ အခုလို ပိတ်မယ့်အကြောင်း ကမ်းခြေလျှောက် မနေ့က လှည့်လည်ကြေညာခဲ့သလို စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ အခြားဆိုင်တွေကိုပါ အသိပေးခဲ့တာပါ။ စစ်တွေမြို့မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ကပင် အသိပေး ကြေငြာထားပေမယ့် မလိုက်နာတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီလောက်ကပင် ကမ်းခြေကို အခုလိုပိတ်လိုက်တာလို့ စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုလေးက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ကမ်းခြေကိုစတင်ပိတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စဟာလည်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အကျုံးဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် အခြေအနေအရ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို စည်းကမ်းချက်တွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်တွေမြို့မှာ မနေ့ကအထိ ဆောင်းဘောက်တွေဖွင့်ပြီး ကားပတ်သူအချို့နဲ့ ကမ်းခြေမှာ လာရောက် ရေကစားသူတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ မှာ တော့ လူသူကင်းမဲ့သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းရွှေက ကပ်ရောဂါဘေးကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် လူထုက ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးက အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ဘုရားကျောင်းကန်သွားလေ့ရှိတဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာပါ လူစုလူဝေးတွေမဖြစ်ရ အောင်နဲ့ ပင်စင် စားတွေအတွက် ပင်စင်လစာထုတ်ပေးရေး ကိစ္စအတွက်ပါ ကျယ်ဝန်းတဲ့ခန်းမတစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး စနစ်တကျထုတ်ပေးဖို့ အထိပါ စီစဉ်ထားတယ်လို့ စစ်တွေခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မှာ လက်ရှိပြည်ပကပြန်လာတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၁၇ ဦးကို စောင့်ကြည့်နေပြီး လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ မရှိသေးပါဘူး။ https://www.rfa.or g/burmese/news/sittwe-beach-close-04152020075142.html
၁၈။ AA နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ သတင်းသမားတချို့တိမ်းရှောင်နေရဆဲ
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့တာရှိတဲ့အတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုတာ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့် သတင်းမီဒီယာသမား တချို့ အခုအချိန် အထိ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။
အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ သတ်မှတ်အပြီး ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းတဲ့အတွက် Voice of Myanmar VOM သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုနေမျိုးလင်း၊ ခေတ်သစ် မီဒီယာအယ်ဒီတာချုပ် ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်နဲ့ နိရိဉ္စရာသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုခိုင်မြတ်ကျော်တို့ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြမ်း ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ ဒီတရားစွဲခံရတဲ့အထဲက VOM သတင်းဌာန တည်ထောင်သူ အယ်ဒီတာ ကိုနေမျိုးလင်းကို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၁၀ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရာမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတာမတွေရလို့ဆိုပြီး ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုနေမျိုးလင်း ကို လွှတ်ပေးပြီးနောက်နေ့မှာဘဲ ပြည်ထဲရေးကအမှုဖွင့်ထားတဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေကို အမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးဖို့ စာပို့ ထားတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စွာမင်း က ပြောပါတယ်။
ကိုနေမျိုးလင်း ကို အမှုနဲ့ မငြိစွန်းဘူးလို့ ဥပဒေရုံးက မှတ်ချက်နဲ့ ပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့် AA အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းဖော်ပြ မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် နိရိဉ္စရာ သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုခိုင်မြတ်ကျော်နဲ့ ခေတ်သစ်မီဒီယာ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုသာလွန်ဇောင်းထက် တို့ကတော့ အခုအချိန်အထိ တိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထူးခြားချက်တခုက ကိုခိုင်မြတ်ကျော်နဲ့ ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်တို့ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
“မီဒီယာသမားတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်တာဘဲ၊ သတင်းဆိုတာနှစ်ဖက်အသံပါမှပြည့်စုံတာ၊ အသံမဲ့နေသူတွေရဲ့ အသံ ဖော်ထုတ် ပေးရမှာက ကျနော်တို့တာဝန်ပဲလေ၊ ဒါကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတို့ မတရားအသင်း ဥပဒေတို့နဲ့ တရားစွဲတာတွေက လုံးဝမသင့်တော်တဲ့ကိစ္စပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း အဆင့်နိမ့်စေပါတယ်၊ သူများတိုင်းပြည်တွေက ပြောစရာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားနေတယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေက လုံးဝကိုမရှိသင့်ပါဘူးခင်ဗျ” သတင်းမီဒီယာသမား တွေကို ပြည်ထဲရေးကစွဲဆိုတဲ့ပုဒ်မတွေဟာ သေဒဏ်အထိပေးလို့ရတဲ့ပုဒ်မတွေ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့ အစိုးရက ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း AA ကို ဆက်သွယ်သတင်းမေးမြန်းခဲ့တဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ၊ သတင်းသမားတွေကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ သတင်း စကားတွေကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-myanmar-government-journalists–04152020113910.html
Covid-19 ပိုးတွေ့ လူနာအမှတ် ၈၂ ဖြင့်ထိတွေ့ခဲ့သော မြစ်ကြီးနား၊ ခေမာသီရိ ရပ်ကွက် (၃) မှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ယနေ့ ည ၄ နာရီချိန်တွင် ၎င်း၏နေအိမ်မှ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံ Quarantine ထားရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ခေမာသီရိအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံမှသိရသည်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် စင်ကာပူမှ တူရကီသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တူရကီမှ ရန်ကုန်သို့ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ရောက်ရှိကာ ရန်ကုန်တွင် ၁၄ ရက် Quarantine နေခဲ့ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့၎င်း၏နေအိမ်သို့ ဧပြီလ ၇ ရက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သူရောက်နေတာ ကျနော်တို့ဆီမှာအကြောင်းကြားတာလည်းမရှိဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က လာပြောမှ ကျနော်တို့သိရတာ ပြောတဲ့သူကလည်း လိပ်စာအပြည့်အစုံမသိတော့ ကျနော်တို့မှာရှာလိုက်ရတာ။ ခုတော့ အစိုးရ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Q နေရာကို လိုအပ်တာတွေစစ်ဆေးဖို့တွက် ရောက်ရှိနေပါပြီ။” ဟု ခေမာသီရိအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရာဂျမ်းက ပြောသည်။
ခေမာသီရိရပ်ကွက်တွင်းရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိ မိသားစုအတွင်း ပြည်တော်ပြန်များရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ အကြောင်း ကြားပေးရန်နှင့် အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါက ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ယခု မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံသို့ ဆေးစစ်ရန်ရောက်ရှိသူသည် လူနာအမှတ် ၈၂ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinn ews.com/2020/ 04/16/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%94%e1%80%ac%e1%
၂၀။ မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၌ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက် အပြည့်အဝရရှိရေး ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၆ ဖွဲ့ တောင်းဆို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ ၂၆ ဖွဲ့သည် ဒုက္ခသည်များ၊ နေရပ်စွန့်ခွါထွက်ပြေးသူများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိစေရန်နှင့် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကော့စ်ဘဇား၊ ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက်နှင့် ဆယ်သွယ် ရေး အပြည့်အဝရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရတို့အား ဒီကနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ကော့စ်ဘဇားဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများ၊ မသန်မစွမ်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအပါအဝင် ဘင်္ဂါလီ (မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ) တစ်သန်းခန့်သည် နေရာအကန့်အသတ်ဖြင့် ကျပ်တည်းစွာ နေထိုင်နေကြရသည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိ နယ်စပ်များမှ အဆိုပါ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသည် လူဦးရေသိပ်သည်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောရေနှင့် ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင် ရာ ပစ္စည်းများ မလောက်ငှခြင်း၊ COVID-19 ရောဂါ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးမည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်မရှိခြင်း စသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ကော့စ်ဘဇားတို့တွင် အသက်ရှူစက်များလည်းအလုံအလောက်မရှိသည့် အခြေအနေများကြောင့် ရောဂါ ကူးစက်မှုများ မြန်ဆန်ပြီး သေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ ၊ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအား COVID-19 ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောစီမံချက်များ လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည် ဟု အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် မြို့နယ် ၉ မြို့တွင်လည်း ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ မိုဘိုင်းအင်တာသုံး စွဲမှု ဖြတ်တောက်ထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှသာ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာရှိနေသူများအနေဖြင့် မည်သည့် အချိန်တွင် မည်သို့ သီးသန့်ခွဲနေရမည်ကို သိမည်ဖြစ်ကာ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ၎င်းတို့အားပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူ များကို ထိတွေ့ကူးစက်မှု လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသရန်လိုအပ်သူများအတွက် ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဒေသများသို့ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့များလုပ်ဆောင်ရန် အရေးတကြီးလိုအပ် ကြောင်း၊ မိုဘိုင်းအင်တာနက်များမသုံးစွဲနိုင်ပါက လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့ အစည်းများက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိုတောင်းဆိုချက်ကို International Rescue Committee၊ World Vision ၊ People in Need Myanmar ၊ Plan International ၊ Save the Children နှင့် United Purpose ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/69026
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တောဒေသ၌ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ ဧပြီ ၁၅ ရက်တွင် ခမောင်းဆိပ်ကျေးရွာသို့ အရေးကြီးစာလာပို့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကို ယင်း ကျေးရွာမြောက်ဘက် မီတာ ၂၀ဝ၀ ခန့်မှ ARSA အကြမ်းဖက်သမား ၃၀ ခန့်က ပစ်ခတ်သဖြင့် နှစ်ဦးအသက်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဆိုသည်။
“ARSA အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ၊ အစီရင်ခံစာ (ICJ သို့ တင်သွင်းရမည့်အစီရင်ခံစာ)တင်ခါနီးမှာ ခပ်စိပ်စိပ်လေးလှုပ်ရှား လာတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။ ထို့အပြင် ဧပြီ ၁၄ ရက် ညပိုင်းတွင် မောင်တောဒေသ ဖားဝပ် ချောင်းအနီး တည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်နေသည့် ဘက်ဟိုးယာဉ်တစ်စီးကို ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ https://7day.news/detail?id=184080
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့အနီးမှာ အင်အား ရစ်(ခ်)တာစကေး ၄ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့ မိုးဇလဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇ နာရီ၊ ၁၇ မိနစ်၊ ၁၇ စက္ကန့် အချိန်မှာ ဟားခါးမြေငလျင်စခန်းမှ အရှေ့-အရှေ့မြောက် ဘက် ၂၇ မိုင်ခန့် ကွာဝေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ဖလမ်းမြို့ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၅ မိုင်ခန့်အကွာ မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၂.၇၄) ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၄.ဝ၂) ဒီဂရီ၊ အနက်(၃)ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်ခတ်သွားတာလို့ ထုတ်ပြန်ချက် မှာဖော်ပြပါတယ်။ အလား တူ ဒီနေ့ ညနေ (၆) နာရီ၊ (၁၅) မိနစ်၊ (၂၅) စက္ကန့် အချိန်ကလည်း ဟားခါးမြေငလျင်စခန်းမှ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် (၂၇)မိုင် ခန့်ကွာဝေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း (ဖလမ်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်(၂၄)မိုင်ခန့် အကွာ)၊ မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၂.၇၄)ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၄.ဝ၁)ဒီဂရီ၊ အနက်(၁၂)ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အားရစ်(ခ်) တာစကေး(၆.၁)အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်း န်သော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မနက် ၁၀ နာရီ၊ ၇ မိနစ်၊ ၃၇ စက္ကန့်လောက်ကလည်း ခန္တီးမြို့တောင်ဘက် ၈ မိုင်ခန့် အကွာမှာ အင်အားရစ်(ခ်) တာစကေး ၃ ဒသမ ၅ အဆင့်ရှိ အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့ မြေငလျင်တခုလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒီနေ့ တရက်တည်း မြေငလျင် ၄ ကြိမ်လှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပြီး ငလျင်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အခြေအနေသတင်းတွေကတော့ မရရှိသေးပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/382755
၁။ AA ကို မတရားအသငျး ကွညောတိုကျခိုကျခွငျးသညျ တခွားတိုငျးရငျးသားအဖှဲ့မြားအပျေါသတိပေးခွငျးဖွဈကွောငျး IKO ပွော
၂။ မွဈကွီးနားမှာ စားသောကျကုနျ ဝတေဲ့အစီအစဉျ လူစုလူဝေးကွောငျ့ ရှဆေို့ငျး
၃။ တောငျကွီး ဂေါကျကှငျး အဝငျတှငျ အမြိုးသားတဦး သဆေုံး
၄။ ပလကျဝမွို့ခံလူထုနှငျ့ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ရိက်ခာဆနျ ပို့ဆောငျမရ ဖွဈနေ
၅။ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ဈေးရောငျးရမညျ့ အခြိနျမြား ထပျမံ ပွောငျးလဲ
၆။ လိုအပျခကျြမြား ရှိနသေဖွငျ့ တီးတိနျမွို့ LockDown ခမြခြ အခွအေနကွေညျ့ပွီးမှ ဆောငျရှကျမညျဟု ဆို
၇။ ရှမျးပွညျနယျတှငျ Mask မတပျသူမြားအား အပွဈပေးမှုမြားလုပျနေ
၈။ ဝိုငျးမျောကြေးရှာအခြို့တှငျ တရုတျကုမ်ပဏီသို့ နစေ့ားသှားခွငျးမပွုရနျ အမိနျ့ထုတျ
၉။ မောငျတောမွို့တှငျ ရိုးရာအစဉျအလာမပကျြ နံ့သာသှေး၍ မွို့တှငျးလှညျ့လညျ ဘုရားရသေပ်ပါယျ
၁၀။ တီးတိနျဆေးရုံမှ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာမြားကို ကလေးမွို့ဆေးရုံသို့ ပွောငျးရှလေ့ငျြ တားဆီးမညျဟု မွို့လူထုက ကွညော
၁၁။ ရခိုငျမွောကျပိုငျး မွို့နယျတခြို့ လြှပျစဈမီး ပွနျမရသေး
၁၂။ မိုငျးဆတျခရိုငျအတှငျးရှိ ဈေးမြားအားလုံး ယာယီပိတျထားမညျ
၁၃။ ဘားအံဆေးရုံကွီးရှိ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၈ ဦး ရောဂါပိုးမတှရှေိ့
၁၄။ တောငျကွီးမွို့ရှိ မတ်ေတာရှငျဆေးရုံတှငျ Hospital Quarantine ထားရှိခွငျးကို နယျမွေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခနျ့က ကနျ့ကှကျ ကွသဖွငျ့ လူစုလူဝေးဖွဈကာ လုံခွုံရေး တာဝနျရှိသူမြားမှ လူစုခှဲရနျ ဆောငျရှကျခဲ့ရ
၁၅။ စဈဆေးရေးဂိတျတှမှော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့တှေ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျ
၁၆။ လူနာအမှတျစဉျ ၆၃ ၏ စကျရုံမှပွနျလာသူကို မွဈကွီးနား မနျခိနျ နအေိမျတှငျ Home Quarantine လုပျထား
၁၇။ ရောဂါကူးစကျမှု ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ စဈတှကေမျးခွကေိုပိတျ
၁၈။ AA နဲ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တဲ့ သတငျးသမားတခြို့တိမျးရှောငျနရေဆဲ
၁၉။ လူနာအမှတျစဉျ ၈၂ ဖွငျ့ထိတှခေဲ့သော မွဈကွီးနားမှ အမြိုးသမီးတဈဦးကို ဆေးရုံသတျမှတျနရောသို့ ပို့ဆောငျထား
၂၀။ မွနျမာနှငျ့ဘင်ျဂလားဒရှေျ့၌ ဆကျသှယျရေးနှငျ့မိုဘိုငျးအငျတာနကျ အပွညျ့အဝရရှိရေး ထောကျပံ့ရေးအဖှဲ့အစညျး ၂၆ ဖှဲ့ တောငျးဆို
၂၁။ ARSA ၏ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျနှဈဦး ကဆြုံးဟု တပျမတျောပွော
၂၂။ ဖလမျးမွို့အနီး အငျအားအနညျးငယျရှိ မွငေလငျြလှုပျခတျ
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အခွစေိုကျနသေညျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)ကို မတရားအသငျးကွညောပွီး ထိုးစဈဆငျ တိုကျခိုကျနမှေု မြား သညျ တခွားသော တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား ( EAOs)ကို သတိပေး လိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု သုံးသပျ ကွောငျး နိုငျငံတကာ ကရငျအဖှဲ့အစညျး – IKO က ယနေ့ (ဧပွီ ၁၄ရကျ) သဘောထားထုတျပွနျ၍ ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ရက်ခိုငျ့ တပျတျော (AA)သညျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး စတငျဆှေးနှေးစဉျကတညျးက ပါဝငျလာခဲ့သော အဖှဲ့အစညျး တဈခုဖွဈကာ လကျရှိတှငျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးနသေော ကာလဖွဈသလို AA အပျေါသဲကွီးမဲကွီး ထိုးစဈ ဆငျ တိုကျခိုကျနခွေငျးသညျ တိုငျးရငျးသားမြား လိုလားသော အနာဂတျ ဖကျဒရယျ တညျဆောကျရေးကို အ နှောငျ့အယှကျဖွဈ စပွေီး အစိုးရ၊ တပျ မတျော၏ သဘောထားမြားကွောငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ရှဆေ့ကျရနျ အခကျကွုံနရေကွောငျး IKO က ဆိုသညျ။
IKO ပွောခှငျ့ရ စောဇျောနောငျက “ရခိုငျတပျမတျောကို မတရားအသငျးအဖွဈကွညောပွီး ထိုးစဈဆငျလိုကျတဲ့ ကိစ်စက NCA လကျမှတျထိုးပွီးတော့ မတရားအသငျးဖကျြသိမျးခံရတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှရှေိတယျ။ ဒီအဖှဲ့အစညျး တှကေိုလညျးပဲ ဗမာ့တပျမတျောက လိုအပျလာရငျ အခြိနျမရှေး မတရားအသငျးအဖွဈနဲ့ ကွညောနိုငျတဲ့ အခွအေနရှေိတယျလို့ ကနြျောတို့က သုံးသပျတယျ။ ပွောခငျြတာက မနာခံဘူးဆိုရငျတော့ ရခိုငျလိုပဲ မငျးတို့လညျး ဖွဈကွရမယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့ဗြာ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလ ၂၃ရကျနကေ့ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာနမှ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA)နှငျ့ ၎င်းငျးအဖှဲ့၏ လကျ အောကျခံ အဖှဲ့မြားကို အကျဥပဒေ ပုဒျမ ၁၅၊ ပုဒျမခှဲ (၂)ပါ အဓိပ်ပာယျ ဖျောပွခကျြမြားနှငျ့အညီ မတရားအသငျး အဖွဈသျောလညျးကောငျး၊ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးဗဟိုအဖှဲ့မှ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၊ ပုဒျမခှဲ (င) နှငျ့ ပုဒျမ ၇၂၊ ပုဒျမခှဲ (ခ) အရ AA အဖှဲ့ကို အကွမျးဖကျအုပျစုဖွငျ့ ကွညောခဲ့ပွီးနောကျ ခငျြးပွညျ နယျနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတို့တှငျ AA နှငျ့ တပျမတျော တို့အကွား တိုကျပှဲမြား ပိုမိုပွငျးထနျလာခဲ့သညျ။
အဆိုပါ လုပျရပျမြားအပျေါ လူ့အခှငျ့အရေး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသညျ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးမြား၊ အမြိုးသမီးအဖှဲ့ အစညျးမြား၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားအပွငျ တိုငျးရငျးသားလကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးအခြို့မှ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ (COVID-19) ဖွဈပှားခြိနျ တိုငျးရငျးသား ဒသေမြားတှငျ ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျမှုမြား မပွုလုပျရနျနှငျ့ တဈနိုငျငံ လုံး အပဈအခတျရပျစဲမှုကို ကွညောရနျ တိုကျတှနျးတောငျးဆိုထားမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/04/aa%e1%80%80%e1%80%a 1%80%ad%e1% 80%99%e1%80%90%
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့မှာ ဦးလဆနျအောငျ (ငွိမျးခမျြးရေးအဖှဲ့)က လူထုကို ဆနျ၊ ဆီ နဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှေ ဒီနေ့ လှူဒါနျးဖို့ ပွငျဆငျခဲ့ပမေယျ့ လူတဈထောငျခနျ့ စုဝေးလာခဲ့တာကွောငျ့ လှူဒါနျးခွငျး ရပျနားလိုကျပါတယျ။
မွဈကွီးနားမွို့၊ ဗလမငျးထငျ တံတားနားမှာ ဒီမနကျ ခုနှဈနာရီကစပွီး မွဈကွီးနားနဲ့ ဝိုငျးမျောမွို့နယျက ဒသေခံတှကေ အခွခေံ စားသောကျကုနျတှေ ဝမှောကို လာရောကျတနျးစီခဲ့ကွတာပါ။ တဖွညျးဖွညျးလူမြားလာပွီး လူစုလူဝေးဖွဈလာတဲ့အတှကျ လှူဒါနျးမယျ့ အစီအစဉျကို ရှဆေို့ငျးလိုကျပွီး ရပျကှကျအလိုကျ နထေိုငျသူစာရငျး ကောကျယူမှုကို အရငျ ပွုလုပျမယျလို့ အလှူ
မှာ ကူညီပေးနတေဲ့ ဦးခငျမောငျပွုံးက ပွောပါတယျ။ မအားတဲ့ကွားကနေ အခြိနျပေးပွီး လာရောကျတနျးစီခဲ့ပမေယျ့ မရခဲ့ တဲ့အတှကျ မကမြေနပျ ဖွဈမိတယျလို့ ရမျပူကှကျ(၁) က လာထုတျတဲ့ ဒျေါမွငျ့မွငျ့က ပွောပါတယျ။
ဒီနမေ့နကျက ပေးဝမေယျ့ အစီအစဉျမှာ အလှူရှငျက ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ တဈခုဖွဈတဲ့ ဦးလဆနျအောငျ (ငွိမျးခမျြးရေးအဖှဲ့) ဖွဈပါ တယျ။ လူတဈဦးကို ဆနျ သုံးပွညျ၊ ဆီတဈဗူးနဲ့ နှာခေါငျးစညျးငါးခု ပေးဖို့စီစဉျခဲ့တာပါ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ အလုပျတှနေား ထားရလို့ ဝငျငှမေရှိတဲ့အခြိနျ လှူဒါနျးပေးတယျဆိုတော့ ဝမျးသာပွီး လာတနျးစီခဲ့ပမေယျ့ မရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရ ကွောငျး ဦးစိုးထှနျးက ပွောပါတယျ။
အလှူရှငျတှအေနနေဲ့ လှူဒါနျးမယျဆိုရငျ အခုလို လူစုလူဝေးမလုပျဘဲ အုပျခြုပျရေးမှူးတှကေနတေဈဆငျ့ စနဈတကြ စီစဉျ သငျ့တယျလို့ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ ထှယျဂနျြဒါ အဖှဲ့က ဒါရိုကျတာ ဒျေါနနျပူက ထောကျပွပါတယျ။ အစိုးရက လညျး ရောဂါကာကှယျ တားဆီးနိုငျဖို့ လူစုလူဝေးတှမေလုပျကွဖို့နဲ့ အတတျနိုငျဆုံး အိမျအပွငျ မထှကျကွဖို့ သတိပေးထားပါ တယျ။https://www.rfa.org/burmese/news/myitkyinafooddisrtibutionpostpone4142071519.html
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ ဂေါကျကှငျးအဝငျပေါကျတှငျ အမြိုးသားတဦး သဆေုံးနကွေောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ သဆေုံးသူ၏ ရုပျအလောငျးကို ဂေါကျကှငျးအဝငျပေါကျ အနီး မိုငျတိုငျ ၁၁၆/၆ ဘေးမွောငျးထဲတှငျ ယနေ့ မနကျ ဧပွီ ၁၄ ရကျတှငျ တှရှေိ့ကွောငျး တောငျကွီးမွို့မ ရဲစခနျးမှ ရဲအရာရှိ တဦး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။ “ သဆေုံးသူက သကျလတျပိုငျး အရှယျပါ။ ဘာကွောငျ့ သလေဲဆိုတာတော့ အတညျပွုလို့ မရသေးဘူး။ ခု သဆေုံးမှုက ပွငျပဒဏျရာ မရှိဘူး” ဟု ၎င်းငျးရဲအရာရှိ က ဆိုသညျ။ သဆေုံးသူ အလောငျးသညျ ရငျခှဲရုံတှငျ စဈဆေးသှားမညျဖွဈပွီး ပွငျပဒဏျရာ မရှိလြှငျ သမှေု သခေငျး နှငျ့ ဓမ်မတာ သဆေုံးမှု ဖွငျ့ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ရဲအရာရှိ က ထပျလောငျးပွောသညျ။
ထို အမြိုးသား သဆေုံးသညျ့နရောကို တောငျကွီး ပရဟိတ အဖှဲ့မှ ပိုးသတျဆေးမြား ခကျြခငျြး သှားရောကျဖွနျးပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ “ လူတယောကျ ဂေါကျကှငျးအဝငျပေါကျရဲ့ မွောငျးထဲမှာ သနေတောကွားတော့ ကနြျောတို့အဖှဲ့ ခကျြခငျြး ဆေးသှား ဖွနျးပေးလိုကျတယျ။ ဘာကွောငျ့ သလေညျးတော့မသိဘူး” ဟု ဆေးသှားဖွနျးသညျ့ ကိုဝငျးနိုငျစိုးက ပွောသညျ။
လကျရှိအခြိနျတှငျ COVID-19 ဖွဈပှားမှုမြားနသေညျ့ အခြိနျဖွဈသညျ့အတှကျ ထိုသဆေုံးသူသညျ မညျသညျ့ရောဂါဖွငျ့ သဆေုံး သှားသညျကိုတောငျကွီးဒသေခံမြားမေးခှနျးထုတျနကွေသညျ။ https://burmese.shannews.org/archive s/16150
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) အကွား စဈရေးပဋိပက်ခကွောငျ့ ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျး ပွတျတောကျကာ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျနသေညျ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့ ပွညျသူမြားနှငျ့ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ခငျြးအရပျဘကျအဖှဲ့ အစညျးမြားက ရိက်ခာဆနျမြားပို့ဆောငျရနျ ကွိုးစားခဲ့ကွသျောလညျး အခကျအခဲရှိနသေညျဟု သိရသညျ။
ပလကျဝသို့ ပို့မညျ့ ရိက်ခာဆနျမြား ဆမီးမွို့သို့ရောကျရှိပွီဖွဈသျောငွား ရှခေ့ရီးဆကျရနျ ကားသမားမြား မဝံ့ရဲသောကွောငျ့ အခကျကွုံနကွေရခွငျးဖွဈသညျ။ “အဓိကတော့ အစိုးရအဖှဲ့ကခှငျ့ပွုတယျ။ နောကျပွီးတော့ တပျကလညျးလုံခွုံရေး သူတို့ပေး မယျ။ ဒါပမေဲ့ကားသမားတှကေမသှားရဲတော့ဘူး။ အဓိကပွဿနာက ကားသမားတှမေသှားရဲတာ။ အဲဒီတော့ ကားသမားတှေ ဘာကွောငျ့ မသှားရဲတာလဲဆိုတော့ သူတို့မှာလညျးအကွောငျးရှိတယျ။ ဟိုတလောကလညျး ကားမီးရှို့လိုကျတာတို့၊ ဆနျအိတျ လုသှားတာတို့၊ အဲလိုဖွဈတော့ သူတို့ကအစိုးရခှငျ့ပွုတာတောငျမှ သူတို့မသှားရဲဘူး။ တပျကလုံခွုံရေးပေးမယျလို့ပွောရငျတော့ ပိုတောငျကွောကျတာပေါ့ဗြာ၊ ဆိုတော့ အဲဒီအနအေထား” ဟု ကူညီထောကျပံ့ရေးလုပျငနျးတှငျ ဦးဆောငျသူတဈဦးဖွဈသညျ့ ခငျြးပွညျနယျ စညျပငျဝနျကွီးဟောငျး ဆလိုငျးအိုကျဇကျခငျက ပွောသညျ။
ခငျြး စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ရိက်ခာဆနျမြား သှားရောကျထောကျပံ့ခဲ့သညျ့ Chin Relief-rehabilitation and Community Development Foundation (CRCDF) မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးဖွဈသညျ့ Chinland Herald သတငျးစာအယျဒီတာ ဆလိုငျးငယျပီက ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ ပလကျဝမွို့အထိ ကိုယျတိုငျသှားရောကျရနျ စီစဉျထား သျောလညျး လုံခွုံရေးအခွအေနေ မပေးသောကွောငျ့ ဆမီးမွို့တှငျ ရိက်ခာမြားထားခဲ့ပွီး ပွနျလှညျ့လာခဲ့ရကွောငျး ပွောသညျ။ ရိက်ခာမြား လကျရှိနရောမှ ဆကျ လကျပို့ဆောငျရေး စရိတျစကပါမကနျြ စီစဉျထားရဈခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးက ဖွညျ့စှကျပွောပွသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျ တှငျ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား တိုးလာဆဲဖွဈပွီး ပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ ၃ ထောငျကြျောရှိကာ ဆမီးမွို့ပျေါတှငျလညျး ၃ ထောငျ နီးပါး ရောကျရှိနကွေသညျ။ https://www.bnionline.n et/mm/news-72252
ကခငျြပွညျနယျအတှငျး အစိုးရစညျပငျဈေးနှငျ့ ကြေးလကျဈေးမြားကို နံနကျ ၅ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိသာ ဖှငျ့တော့မညျဖွဈ ကွောငျး ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ ယနေ့ ထပျမံထုတျပွနျထားသညျကို တှရေ့သညျ။ ယခငျက နံနကျ ၅ နာရီမှ ၁၀ နာရီ၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ ခှငျ့ပွုထားခွငျး ဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ ဈေးရောငျး ဈေးဝယျသူမြားအားလုံး နှာခေါငျးစညျးတပျဆငျ ရမညျဟုလညျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။
မွဈကွီးနားရှိ လူထူထပျသော ရှညေောငျပငျရပျကှကျ ဝကျကုနျးဈေးတှငျ ဧပွီလ ၁၅ရကျနမှေ့စကာ တဈဦးလြှငျ ၆ပအေကှာ ရောငျးခနြိုငျရနျ စီစဉျနသေညျဟုလညျး ရှညေောငျပငျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးအောငျဝငျး ပွောသညျ။ “ကနြျောတို့ကတော့ နတေို့ငျး ဈေးဝယျလာတဲ့သူတှေ၊ ဈေးရောငျးမယျ့သူတှကေို Mask တပျဖို့ Hand Speaker နဲ့နတေို့ငျးအျောပွောပွီးပွီ။ ပွီးတော့ ခု ပွညျနယျ အစိုးရကလညျး ထပျပွီးထုတျပွနျလာတဲ့တှကျကွောငျ့မို့ နကျဖွနျကစပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ၆ ပေ အကှာမှာ ရောငျးခနြိုငျဖို့တှကျ စီစဉျနပေါတယျ။” ဟု ပွောသညျ။
“ဘာမှလိုကျနာတာမတှရေ့ဘူး။ ကမြတို့မှာတော့ Stay at Home သာလုပျတာ အိမျရှမှေ့ာ မနကျမနကျဆိုရငျ ဈေးလာဝယျတဲ့ သူတှကေလညျး နှာခေါငျးစညျးတပျထားတာလညျးမတှရေ့ဘူး။ ပွီးတော့ တဈခြို့ ဆိုငျကယျပျေါကနထေိုငျပွီး စောငျ့နတေဲ့ သူတှကေလညျး ခြောငျးဆိုးတဲ့လူနဲ့ နှာခတြေဲ့သူနဲ့ ကမြအိမျက ဈေးကပျရပျဖွဈနတေော့ ပိုကွောကျရတယျ။ ဈေးသညျတှေ ကလညျး နှာခေါငျးစညျးတပျတာမတှရေ့ဘူး။ ကမြတို့ကသာ ဘယျလောကျဂရုစိုကျစိုကျ ပတျဝနျးကငျြမှာကိုက အဲလိုဖွဈနရေငျ နရေတာစိတျမခမျြးသာဘူး။ အားလုံး အသိစိတျဓါတျနဲ့ ကာကှယျကွရငျ ပိုကောငျးမယျထငျတယျ။” ဟု အမညျမဖျောလိုသူ ဒသေခံတဈဦး ကခငျြသတငျးဌာနသို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ ဝကျကုနျးဈေးသညျ ရှညေောငျပငျ၊ ကြှနျးပငျသာ၊ အေးစတေီ စသညျ့ ရပျကှကျ ၃ ခုမှ ပွညျသူမြား ရောငျးဝယျနသေညျ့ ဈေးဖွဈသညျ။ အလားတူ မွဈကွီးနားမွို့တှငျး အခွား ရပျကှကျမြားရှိ မနကျဈေးမြားတှငျလညျး လူထူထပျနပွေီး ရောဂါကူးစကျ လှယျသောကွောငျ့ နရောကယျြပွီး ဈေးသညျ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ ၆ ပခေနျ့အကှာရောငျးခနြိုငျရနျ သကျဆိုငျရာမှ စီစဉျပေးသငျ့ကွောငျး ပွောဆိုမှုမြား ရှိနကွေသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/14/%e1%80%80%e1%80%81%e1%8 0%bb%e1%
ကိုဗဈ-၁၉ ဗိုငျးရပျဈ ဓာတျခှဲစဈဆေး အတညျပွုလူနာ ၃ ဦး အထိရှိနသေညျ့ တီးတိနျမွို့ LockDown ခမြခကြို လိုအပျ ခကျြမြား ရှိနသေဖွငျ့ နယျမွအေခွအေနကွေညျ့ပွီးမှ ဆောငျရှကျမညျဟု ခငျြးပွညျနယျအစိုးရ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျ က ပွောသညျ။
“ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအတှကျကို LockDown လုပျမယျဆိုရငျလညျး သူ့ရဲ့လိုအပျခကျြတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ရေ၊ မီး လုံလောကျဖို့ရယျ၊ တခွားတှလေညျးအမြားကွီးရှိတယျ၊ စားနပျရိက်ခာပွညျ့စုံဖို့ စတဲ့အခကျြတှေ အမြားကွီးရှိတယျ၊ အဲဒါတှကေို တဈမွို့လုံး လုံလောကျအောငျလုပျဖို့က မလှယျဘူးပေါ့နျော”ဟု စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ပွောသညျ။
အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသတျပွီး အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတဈခုမှ ကို Lian Tuang က “အစိုးရဘကျက LockDown ခဖြို့ ဒီခြိနျထိ ဘာမှမလုပျသေးတာ။ ကနြျောပွောခငျြတာက စားနပျရိက်ခာအတှကျဆိုရငျတော့ ပွညျသူတှေ ဝိုငျးဝနျးပံ့ပိုးပေးလို့ရတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီဒသေတဈခုကွောငျ့ အားလုံးအတှကျ ဒုက်ခမရောကျအောငျ ကနြျောတို့က ဝိုငျးဝနျးပံ့ပိုးသငျ့တယျလို့ ယူဆတယျ၊ တီးတိနျကို အဲလိုလုပျထားပွီဆိုရငျ အဘကျဘကျကအလှူရှငျတှေ ပွညျသူတှေ အားလုံးပံ့ပိုးပွီးတော့ မငတျ လောကျပါဘူးလို့ ကနြျောကတော့ ယူဆတယျ”ဟု ပွောသညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျခံနရေသညျ့ သုံးဦးကို အခွအေနအေရ အခွားနရောသို့ရှပွေ့ောငျးမညျမဟုတျဘဲ တီးတိနျဆေးရုံတှငျ ဆကျလကျကုသမညျဖွဈပွီး ကူးစကျခံရသူပိုမြားလာမှသာ ဖလမျး နှငျ့ ဟားခါးဆေးရုံကွီးတို့တှငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားကွောငျးသိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/n ews-72258
ရှမျးပွညျနယျအတှငျး၌ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး ကာလအတှငျး မွို့နယျတာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ နယျခံမြား ပူးပေါငျးကာ စညျးကမျးခြိုးဖောကျသူမြားကို ထိုငျထလုပျခိုငျးခွငျး၊ တုတျဖွငျ့ ရိုကျခွငျးစသညျ့ အပွဈပေးခွငျးမြား ပွုလုပျနေ ကွောငျး လူမှုကှနျရကျတှငျ ပွနျ့နှံ့လာသညျ။ ကလောမွို့နယျ၊ ဟဲဟိုးတှငျ ဧပွီလ ၁၅ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီအခြိနျမှစပွီး ရပျကှကျ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးမြားနှငျ့ ဒသေခံမြားပူးပေါငျးကာ Mask မတပျပဲ အပွငျထှကျလာသူမြားအား တုတျမြားကိုငျ၍ အပွဈပေးမညျ ဟုဆိုကာ လမျးပျေါတှငျ တုတျကိုငျစောငျ့နသေညျ့ ဓါတျပုံမြား လူမူကှနျရကျတှငျ ပွနျ့နှံ့ခဲ့သညျ။
ဟဲဟိုးဒသေခံ မောငျကြျောသနျး က “အပွငျထှကျလာတဲ့သူတှေ Mask မတပျရငျ ရိုကျမယျဆိုပွီး သူတို့က တုတျကိုငျစောငျ့နေ တော့ ကနြျောတို့လညျး ကွောကျတာပေါ့။ သူမြားတှကွေညျ့လိုကျတော့ ရီပွီး ထှကျသှားကွတာ တှတေ့ာပဲ။ ကနြျောတို့ကိုတော့ Mask တပျဖို့ သတိပေးတယျ။ အိမျမှာဆိုရငျ ဘာတှလေုပျရမယျ။ ဘယျလိုနေ ရမယျဆိုတာပွောတယျပေါ့။ တကယျမရိုကျ ပါဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ထို့အကွောငျးအရာနှငျ့ပတျသကျပွီး ဟဲဟိုးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသနျးထိုကျအား မေးမွနျးရာတှငျ ဟဲဟိုးပွညျသူ့ဆေးရုံ ကွီး၏ Facebook စာမကျြနှာတှငျ covid- 19 ရောဂါကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးကျောမတီမှ ပွနျလညျဖွရှေငျး ပေးထား သညျဟု ဆိုသညျ။ ဟဲဟိုးပွညျသူ့ဆေးရုံ က “ဧပွီလ ၅ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီလောကျမှ စလုပျတာပါ။ ဒါကလညျးလတျတလော ဟဲဟိုး မှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ စိတျပူစရာ ကိစ်စတှကွေောငျ့ အုပျကွီးမြားနှငျ့ အမြားအရေး ကူညီကွသူမြား စုပေါငျးပွီး လုပျကွတာပါ။ မေးကွညျ့ပါ တကယျအရိုကျခံရသူရှိလားဆိုတာ ဘယျသူမှမရိုကျပါဘူး။ အားလုံးကို ပိုမို ဂရုစိုကျစခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့မို့ လုပျကွ တယျလို့မှတျယူပေးပါဗြ။ လာကွညျ့ကွညျ့ပါ ကွောကျစရာမဟုတျဘဲ ပြျောစရာကွီး ဖွဈနတောပါ” ဟု ရေးသားထားသညျ။
ထိုအကွောငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး နမျ့လနျမှ တာဝနျရှိသူတဦးက “ရှာကလူတှကေ ပွောစကားနားမထောငျဘူး။ ဒီဘကျမှာက ပွညျတျောပွနျတှေ အရမျးမြားတယျ။ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုလညျး မရှိဘူး။ သူတို့ကို ဘယျလိုပဲ မတ်ေတာရပျခံတယျ ပွောပွော ဘာပွောပွော ဂရုကို မစိုကျဘူး။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ကို ဒီလိုလေး လုပျခိုငျးတာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ https://b urma.irrawaddy.com/news/2020/04/16/220712.html
ဝိုငျးမျောမွို့နယျ စနျးကားကြေးရှာအုပျစုရှိ တရုတျစိုကျပြိုးရေးကုမ်ပဏီသို့ နစေ့ားသှားခွငျး မပွုလုပျရနျ ကြေးလကျအုပျခြုပျရေး ရုံးမှ ညှနျကွားထားကွောငျး စနျးကားကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးထံမှ သိရသညျ။ သကျဆိုငျရာဌာနမှ ညှနျကွားထားခွငျးမရှိသျော လညျး ဒသေ၏လိုအပျခကျြအရ လကျရှိကမ်ဘာတဈဝနျးတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ Covid-19 ထိနျးခြုပျနိုငျရနျတှကျ ယခုကဲ့သို့ ထုတျပွနျထားခွငျးဖွဈကွောငျး အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဒေါငျခေါငျ ပွောသညျ။
“ကုမ်မဏီမှာ နစေ့ားမသှားရဘူးလို့ ထုတျပွနျထားတဲ့ကွားကနေ သှားမယျဆိုလို့ရှိရငျ ပထမတဈခေါကျ ဒုတိယတဈခေါကျ သတိ ပေးတာတှလေုပျမယျ။ တတိယအကွိမျဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ငှဒေဏျခမြှတျမှာဖွဈတယျ။ ခုဘယျရပျကှကျက သှားတယျ မသှားဘူးဆိုတာကို ရပျကှကျကနယျမွမှေူးတှကေို စောငျ့ကွညျ့ခိုငျးထားတယျ။ အားလုံးက လကျရှိဖွဈနတေဲ့ရောဂါ ကို ကာကှယျနိုငျရနျတှကျဖွဈတယျ။” ဟု အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဒေါငျခေါငျ ပွောသညျ။
မွဈကွီးနားမွို့မှ ဝိုငျးမျောဘကျလာရောကျသူမြားအား မိုငျးနားကြေးရှာအဝငျ တိုးဂိတျတှငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမူမြား ပွုလုပျ ပေးပွီး မုတျလှဲလမျးဆုံနားတှငျလညျး ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျသညျ့ စဈဆေးမူမြားပွုလုပျပေးနသေညျကို တှရေ့သညျ။ သို့သျော လညျး စနျးကားကြေးရှာအတှငျးသို့ လာရောကျအလုပျလုပျကိုငျကွသညျ့ နစေ့ားသမားမြားသညျ ခတျခြိုကူးတို့ဆိပျမှ စကျလှဖွေငျ့ ကူးလာသူမြားဖွဈသညျ့တှကျ စိုရိမျရကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ စနျးကားကြေးရှာသညျ အိမျခွပေေါငျး ၇၀ဝ ကြျောရှိကာ ရပျကှကျပေါငျး ၁၁ ခုရှိပွီး လူဦးရေ စုစုပေါငျး ၅၀ဝ၀ ထောငျခနျ့ရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာမှ သိရသညျ။
လူစုလူဝေးဖွဈခွငျးနှငျ့ တရုတျကုမ်ပဏီမှ အလုပျသမားမြား ဈေးလာဝယျခွငျးတို့ကွောငျ့ စနျးကားဈေးကိုလညျး ပိတျထားသညျ ဟု သိရသညျ။ စနျးကားကြေးရှာရှိ ပွညျသူအမြားစုသညျ တောငျယာလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျကွသျောလညျး တရုတျကုမ်မဏီဝငျ လာပွီးနောကျ လယျယာမွမြေားကို ငှားရမျးထားကွသညျဟု သိရသညျ။ ဧပွီလ ၁၅ ရကျနမှေ့စကာ စနျးကားကြေးရှာတှငျးသို့ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ဖွဈစေ၊ သုံးဘီးနဲ့ဖွဈစေ ရှာတှငျးသို့ ဈေးလာရောကျရောငျးခခြွငျးအား တားမွဈသှားမညျဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောမွို့မှာ သင်ျကွနျကာလ မွို့ရဲ့ရိုးရာအစဉျအလာအရ နံ့သာသှေးပွီး ဧပွီ ၁၄ ရကျ မနကျပိုငျးက ကား တှနေဲ့ မွို့တှငျးလှညျ့လညျ ဘုရားရသေပ်ပယျတာတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ဘုရားရေးသပ်ပါယျပွီးပွနျလာတဲ့ ကား ၃ စီးကို မောငျတောမွို့နယျ ရဲ့တပျဖှဲ့က မနေ့ မှနျးလှဲ ၂ နာရီခှဲလောကျမှာ ဖမျးဆီးကာ အုပျထိနျးသူမိဘတှကေို ချေါယူကာ ဝနျခံခကျြ လကျမှတျထိုးပွီး ပွနျလှတျပေးလိုကျကွောငျးသိရပါတယျ။
မောငျတောမွို့နယျ ခတ်ေတမွို့နယျမှူး ဒုရဲမှူးမွငျ့ဆှကေ “သူတို့ကို နိုငျငံတျောက COVID-19 အတှကျပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ဥပဒေ တှကေိုရှငျးပွပွီး နောကျတဈကွိမျမလုပျဖို့ ကတိခံဝနျခကျြလကျမှတျထိုးပွီး ပွနျလှတျပေးလိုကျပါတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျအနနေဲ့ ပေါ့နျော နောကျတဈကွိမျဆိုရငျတော့ အရေးယူတာ ပွုလုပျသှားမှာဖွဈတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။
မောငျတောမွို့ခံ မမလေိုဒီက “အခုက လြှပျစဈမီးလညျး မရဘူး။ အကျတာနကျလညျး မရတော့ ဒီကလူတှကေ ဘာသတငျးမှ မကွားရဘူး။ သတငျးတှမေကွားရတော့ ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့မှုလညျး မရှိတော့ဘူးပေါ့နျော။ နမွေဲတိုငျးနေ စားမွဲတိုငျးစားပေါ့ ဒီအတိုငျးပဲ နထေိုငျကွတယျ။ နောကျပွီး ဒီမှာ ရောဂါဖွဈနတေဲ့လူလညျး မရှိဘူး။ သဆေုံးတာလညျး မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ရိုးရာ အစဉျအလာအရ ဘုရားရေးသပ်ပါယျတာတို့ ဘာတို့ရှိတယျ။ ကမြတို့ ဆိုရငျလညျး နတေိုငျး ဆိုငျဖှငျ့သလိုမြိုး ဖှငျ့နကွေတာပါပဲ။ ထှထှေထေူးထူး စိုးရိမျစရာတော့ မတှမေိ့ပါဘူး”လို့ ပွောပါတယျ။
မောငျတောမွို့မှာ COVID-19 နဲ့ ပတျသကျပွီး အသိပညာပေးတိုကျတှနျးတာတှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျနတေယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ ကွကျခွနေီတပျဖှဲ့ မောငျတောမွို့နယျ ကွကျခွနေီတပျဖှဲ့မှူး ဦးဝငျးနိုငျ ကတော့ ပွောပါတယျ။ အလားတူ ရခိုငျပွညျနယျမွို့ တျော စဈတှမွေို့တှမှောလညျး ဧပွီ ၁၂ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးမှာ နံ့သာသှေးတာ၊ ဘုရားရသေပ်ပါယျတာတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွတယျလို့ မွို့ခံ တှထေံက သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/382569
ခငျြးပွညျနယျ တီးတိနျဆေးရုံတှငျ ကုသမှုခံယူနသေော COVID-19 လူနာမြားကို စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ကလေးမွို့ ဆေးရုံ ကွီးသို့ ပွောငျးရှကေု့သမညျ့အစီအစဉျကို ကလေးမွို့လူထုက လကျမခံကွောငျးနှငျ့ ရှပွေ့ောငျးလာပါက တားဆီးပိတျပငျသှား မညျဟု ကွညောခကျြတဈရပျကို ယနတှေ့ငျ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။ ကလေးမွို့ မွို့မိမွို့ဖမြား၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျး အသငျး အဖှဲ့မြားက အရေးပျေါအစညျးအဝေးကငျြးပပွီးနောကျ ထုတျပွနျလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
” ယခုအခြိနျတှငျ ကလေးမွို့တှငျ ကိုဗဈ (၁၉) ရောဂါကူးစကျမှုမရှိအောငျ ကွိုးစားဆောငျရှကျနခြေိနျ အဆိုပါ ကိုဗဈ (၁၉) ကူးစကျလူနာမြားအား ကလေးမွို့ဆေးရုံကွီးသို့ ပွောငျးရှကေု့သခွငျးကို မွို့လူထုက လုံးဝ (လုံးဝ) လကျမခံပါကွောငျး သဘောတူဆုံးဖွတျကွပါသညျ။” ဟု ပါရှိသညျ။ ” အဆိုပါ ကိုဗဈ (၁၉) လူနာမြားအား ခငျြးပွညျနယျ ပွညျနယျဆေးရုံကွီးတှငျ ရှပွေ့ောငျးကုသခွငျးသာလြှငျ မှနျကနျသညျဟု ယူဆပါသညျ။ အကယျ၍ ဝဘောဂီကူးစကျဆေးရုံသို့ ရှပွေ့ောငျးကုသလြှငျ ကလေးမွို့လူထုက ကုနျကစြရိတျ ထောကျပံ့ပါမညျ။” ဟုလညျး ဖျောပွထားသညျ။
အစောပိုငျးက တီးတိနျဆေးရုံမှ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာမြားကို ဖလမျးခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကိုလညျး ပွောငျးရှခွေ့ငျးမပွုရနျလညျး ကနျ့ကှကျထားသညျဟု သိရသညျ။ တီးတိနျဆေးရုံကွီးတှငျ ကိုဗဈ (၁၉) လူနာ သုံးဦး တကျရောကျကုသမှုခံယူနရေသညျ။ တီးတိနျဆေးရုံတှငျ လူနာမြားကုသရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုပစ်စညျးမြားလိုအပျလကျြရှိသညျဟု သိရသညျ။ http://ww w.mizzimaburmese.com/article/68977
ရခိုငျမွောကျပိုငျးက ရသတေ့ောငျ၊ ဘူးသီးတောငျနဲ့ မောငျတောမွို့နယျတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလအစောပိုငျး လောကျ က တိုကျပှဲ တှကွေောငျ့ ဓာတျကွိုးတှေ ပွတျတောကျခဲ့တာကွောငျ့ လြှပျစဈမီးပွတျတောကျနခေဲ့တာပါ။ လြှပျစဈဌာနက ပွငျပေးမယျလို့ ပွောမဲ့ ခုအခြိနျအထိ မီးမရရှိသေးဘူးလို့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောအမတျ ဦးခငျမောငျလတျ က ပွောပါတယျ။
“ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ အဲဒီဘကျကြ ကြေးရှာအနီးမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တာ ရှိတယျ။ အဲဒီမှာ ကွိုးတှေ မီးတိုငျတှေ ထိခိုကျ သှားတာရှိတယျ။ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ လြှပျစဈဌာနကပွောတယျ။ သူတို့က ပွငျဖို့တော့ ကွိုးစားနတေယျ ဒါပမေဲ့ တိုကျပှဲက လညျး နစေ့ဉျလိုလို ဖွဈနတေော့ အဆငျမပွသေေးဘူး။ တိုကျပှဲရပျနားသှားတဲ့ အခါသူတို့ ကွိုးစားပွီးပွငျပေးမယျ လို့တော့ သူတို့က ပွောပါတယျ။ “ဘူးသီးတောငျမွို့နယျမှာလညျး အငျတာနကျ ဖွတျတောကျထားတဲ့အပွငျ လြှပျစဈမီးပွတျ တောကျနေ တာကွောငျ့ အခုလကျရှိ ကူးစကျနတေဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ ပတျသတျပွီး သတငျးအခကျြအလကျ ရယူဖို့ ခကျခဲနကွေတယျ လို့ ဘူးသီးတောငျ ဒသေခံတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုဝငျးနိုငျက ပွောပါတယျ။
“မီးပကျြတာကတော့ ကနြျောတို့ ၁၅ ရကျလောကျတော့ ရှိပွီ။ လကျနကျကွီးကလြို့ မီးပကျြသှားတာလို့တော့ ကွားတယျ။ အစိုးရက တရားဝငျ အကွောငျးကွားတာတော့ မရှိဘူး။ မီးမလာတာနဲ့ ပတျသတျပွီးပေါ့။ မီးမရတော့ ကနြျောတို့ TV တှကွေညျ့ မရတော့ဘူး။ ဒီဘကျမှာက TV မှာ လာတဲ့ သတငျးတှကေိုပဲ ကွညျ့နရေတာလေ။ အခုက သတငျးတှလေညျး ကွညျ့မရ တော့ဘူး။”
ရသတေ့ောငျ ဘူးသီးတောငျနဲ့ မောငျတောမွို့နယျတှကေို ဆကျသှယျထားတဲ့ လြှပျစဈကွိုးတှကေို ပွနျဆကျဖို့ အတှကျ အဲဒီ ဒသေမှာ တိုကျပှဲတှေ ဆကျတိုကျဖွဈပှားနတောကွောငျ့ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ သှားရောကျ လုပျဆောငျဖို့ ခကျခဲနေ တယျလို့ မဟာဓာတျအားလှိုငျးတာဝနျခံ ဦးသိနျးရှကေ ပွောပါတယျ။ “ရှိတယျ၊ ရှိတယျ ဟိုမှာက စဈတပျက ပိတျထားတယျ။ အဲမှာ စဈဆငျရေး နယျမွဖွေဈနတေော့ တိုကျပှဲတှလေညျး ည ဖွဈနတေော့ အဲမှာသှားလို့၊ လာလို့မရဘူး ဖွဈနတေယျ။” ရခိုငျ မွောကျပိုငျးက လကျရှိ လြှပျစဈမီးပွတျတောကျနတေဲ့ ရသတေ့ောငျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောအပါအဝငျ မွို့နယျ ၈ ခုလောကျကို အငျတာနကျလိုငျးတှလေညျး ဖွတျတောကျထားကွောငျ့ ဒသေခံပွညျသူတှအေနနေဲ့ အခကျအခဲမြိုးစုံနဲ့ ကွုံတှေ့ နရေသလို သတငျးအခကျြအလကျတှေ ရယူဖို့လညျး ခကျခဲနကွေတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ https://bu rmese.voanews.com/a /rakhine-electric/5374538.html
ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး မိုငျးဆတျခရိုငျ COVID-19 ကွီးကွပျမှုကျောမတီက ဧပွီ ၁၆ ရကျမှ ၁၉ ရကျအထိ ခရိုငျအတှငျးရှိဈေး ၈ ဈေးကို ၄ ရကျကွာ ပိတျပငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
မိုငျးဆတျခရိုငျ ခရိုငျအထှထှေေ အုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးနမြေိုးအောငျက “ခရိုငျအတှငျး COVID-19 ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကိုတားဆီးဖို့ လူစုလူဝေး ဖွဈစနေိုငျတဲ့ ဈေးအားလုံးကို မနကျ ဖွနျ ကစပွီး လေးရကျကွာ ပိတျပငျတာဖွဈပါတယျ။ မွို့ရှာအလိုကျ ယာဉျ အသှားအလာတှကေိုလညျး ပိတျပငျသှားမှာပါ”လို့ ပွောပါတယျ။
မိုငျးဆတျခရိုငျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၂ ခုနဲ့ မွို့နယျခှဲတခုမှ အထငျကရဈေးရှဈခုဖွဈတဲ့ မိုငျးဆတျမွို့မဈေး၊ ကုနျးကုလားဈေး၊ မိုငျးတှမျးဈေး၊ ယောငျခဈေး၊ မိုငျးခုတျမွို့မဈေး၊ မိုငျးတုံမွို့မဈေး၊ ပုံပါကငျြမွို့မဈေး၊ နားကောငျးမူး ဈေးတှေ ကို တဈပွိုငျတညျး ပိတျပငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အလားတူ မွို့အဝငျအထှကျဂိတျအားလုံးကို ည ၇ နာရီကနေ နောကျ တနေ့ မနကျ ၇ နာရီ အထိ အသှားအလာပိတျပငျမှာဖွဈပွီး လိုကျနာမှုမရှိပါက ဥပဒအေရအရေးယူ ဆောငျရှကျသှားမှာ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ http://b urmese.dvb.no/archives/382565
ကရငျပွညျနယျ၊ ဘားအံပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှာ ဧပွီ ၁၃ ရကျညက နောကျဆုံးရောကျရှိလာတဲ့ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၈ ဦးမှာ ဓာတျခှဲ တှရှေိ့ခကျြအဖွအေရ COVID-19 ရောဂါပိုးမတှရှေိ့ရဘူးလို့ ဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာ ဘရနျအောငျက ပွောပါတယျ။ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၈ ဦးဟာ ဘားအံမွို့နယျအတှငျးကဖွဈပွီး သီးသနျ့ထားရှိပွီး စဈဆေးကုသမှုတှေ ပေးထားသလို စောငျ့ကွညျ့ လူနာတှဟော ထိုငျးနိုငျငံက ပွနျလာသူတှေ မဟုတျဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ဘားအံပွညျသူ့ဆေးရုံ ဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာ ဘရနျအောငျက “ဆေးရုံရောကျလာတဲ့ လူနာမှနျသမြှ စဈတယျ။ နိုငျငံခွား ထှကျတဲ့သူတှတေော့ မဟုတျဘူး။ ဒီကနေ့ ညက အဖွထှေကျတယျ။ Ngative ပဲ”လို့ ပွောပါတယျ။ စောငျ့ကွညျ့လူနာ အားလုံး မှာ ရောဂါပိုးမတှရေ့လို့ ဆေးရုံကနေ ဆငျးခှငျ့ပွုလိုကျပွီလို့ ဆေးရုံအုပျကွီးက ပွောပါတယျ။
အလားတူ မွဝတီဆေးရုံကွီးက စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၂ ဦး၊ လှိုငျးဘှဲဆေးရုံကွီးက ၆ ဦး၊ ကော့ကရိတျခရိုငျ ကော့ဘိနျး တိုကျနယျ ဆေးရုံက ၁ ဦးတို့ဟာလညျး ရနျကုနျ အမြိုးသား ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲဌာနက ပွနျလညျပေးပို့တဲ့အဖွအေရ ရောဂါပိုးမတှရှေိ့ ရ ဘူးလို့ ဧပွီ ၁၄ ရကျက ကရငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/a rchives /38
၁၄။ တောငျကွီးမွို့ရှိ မတ်ေတာရှငျဆေးရုံတှငျ Hospital Quarantine ထားရှိခွငျးကို နယျမွေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခနျ့က ကနျ့ကှကျကွ သဖွငျ့ လူစုလူဝေးဖွဈကာ လုံခွုံရေး တာဝနျရှိသူမြားမှ လူစုခှဲရနျ ဆောငျရှကျခဲ့ရ
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ရှိ မတ်ေတာရှငျဆေးရုံတှငျ Hospital Quarantine ထားရှိခွငျးကို နယျမွေ ၃ မှ လူ ၂၀ ခနျ့က ဝိုငျးဝနျး ကနျ့ကှကျကွသဖွငျ့ လူစုလူဝေးဖွဈကာ လုံခွုံရေးတာဝနျရှိသူမြားမှ လူစုခှဲရနျ လာရောကျရှငျးလငျး ဆောငျရှကျခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။ တောငျကွီးမွို့ ကံသာရပျကှကျ နယျမွေ ၃ မတ်ေတာရှငျဆေးရုံတှငျ COVID-19 Postive လူနာနှငျ့အတူ လယောဉျစီးလာသူမြားအား လာရောကျပို့ဆောငျခွငျးကို ယနေ့ (ဧပွီ ၁၅ ရကျ) ည ၈ နာရီခနျ့တှငျ မတ်ေတာရှငျ ဆေးရုံတညျရှိသော လမျးဆုံ၌ လူစုလူဝေး အငွငျးပှားမှု ဖွဈပှားခဲ့သဖွငျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးမြား၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား လာရောကျ၍ အခြိနျတဈနာရီခနျ့ကွာအောငျ ရှငျးလငျးခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။
“ QC စငျတာ လ(၁၀) မှာ ထခှဲမှာ ရပျကှကျရုံးရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ အထကျတနျးကြောငျးရှိတယျ။ ၁၄ ရကျပွညျ့ လို့ ထှကျသှား သူလညျး ရှိသလို၊ နထေိုငျသူတှလေညျး ၆ ယောကျရှိပါသေးတယျ။ ဒီနညေ့ ဖွဈတာ လယောဉျစီး ခရီးသညျမြားလို့ သိရတယျ။ ကှငျးဆကျလိုကျရငျးနဲ့ FACILITY ပွညျ့စုံစှာ အားလုံးပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျအောငျ မတ်ေတာရှငျဆေးရုံမှာ စောငျ့ကွညျ့ထား ပေး ဖို့ပေါ့။ အဲဒါကို ရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး က နယျမွမှေူးတှကေို ခမြပွရကောငျးလား ဆိုပွီးတော့ နယျမွခေံ တဈယောကျစ နှဈယောကျစ ကနေ အတို့အထောငျလုပျခြိနျမှာ လူစုလူဝေး နဲ့ မကနြေပျလို့ ပေါကျကှဲတယျ။ လကျမခံနိုငျဘူး ဖွဈတယျ။ ဒါကို ကံသာ က ကံဆိုးတယျ။ ဒီပွဿနာ ဖွဈအောငျဖွဈတယျ။ အပွနျအလှနျလေးစားမှု မရှိဘူးလို့ ထငျတယျ။ နောကျဆုတျမှာတော့ မဟုတျဘူး။ ဥပဒဘေောငျတှငျးကနေ လုပျတယျ။ ဒါကို ကှနျပလိနျးတကျတာ ပွီးမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျမှာ ဖွဈတယျ။ လကျရှိရောကျလာတာ (၉) ယောကျပေါ့။ မမြှျောလငျ့ဘဲ ဒီကိစ်စလေး ပျေါလာတယျ။ ” ဟု ကံသာရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဝငျးမောငျက ပွောကွားသညျ ။
“မလိုကျနာဘဲ ဆကျလကျလုပျဦးမယျဆိုရငျ ခေါငျးဆောငျတှေ ရှေးထားပွီးပွီ။ လုပျသငျ့တာကို ဆကျလကျဆောငျရှကျ သှားမယျ။ Positive တှသှေ့ားတဲ့ ခရီးစဉျ မှာ လယောဉျပြံ အတူတူစီးခဲ့သူတှကေို FQ ထားတာကို လကျမခံနိုငျပါဘူး ဆိုပွီး တော့ လုပျတာပေါ့။ အခကျြအလကျတှတေော့ ယူထားပွီးပွီ။ ရဲလုံခွုံရေး တှလေညျး ခထြားပွီးပွီ။ 26 နဲ့ ပါလာတာက တော့ တောငျကွီးမွို့နယျထဲမှာ ၈ ယောကျ ရောကျနတောတော့ ကွာနပွေီ။ ဧပွီလ ၈ ရကျနထေဲ့က ရောကျနတော၊ HQ ပဲ ဝငျနေ ကွတာ ကနျြးမာရေး အားလုံးကောငျးတယျ။ ” ဟု တောငျကွီးမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဖွိုးမငျးထိုကျ က ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/169365
ကယားပွညျနယျအတှငျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှေ စုပေါငျး ဖှဲ့ထားတဲ့ ကနျြးမာရေးဌာနက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ စဈဆေးရေးဂိတျတှေ ထားရှိဆောငျရှကျနတေယျလို့ CHDN အဖှဲ့ရဲ့ Deputy Director (ပရိုဂရမျ) ဦးစိုးမိုးအောငျက ပွောပါတယျ။ “ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါငျး လုပျ ဆောငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ ဆှေးနှေးထားတာတှေ ရှိတယျ”လို့ ဦးစိုးမိုးအောငျက ပွောပါတယျ။
ကရငျနီတိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ ၆ ဖှဲ့က ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ လူထုကနျြးမာရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးကှနျယကျ ( Civil Health and Development Network – CHDN) အဖှဲ့ အနနေဲ့ COVID-19 နဲ့ပတျသကျပွီး ကွိုတငျ ကာကှယျရေး၊ စောငျ့ကွညျ့ရေး၊ သံသယရှိသူတှကေို တှခေဲ့ရငျ ဘယျလိုလှဲပွောငျးမှုလုပျမှာလဲ ဆိုတဲ့အခကျြ(၃)ခကျြကို အဓိက လုပျဆောငျနတောဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေး ဂိတျ(၂၉)ဂိတျမှာ တှရှေိ့တဲ့သံသယရှိသူတှကေို လှဲပွောငျး ရေးစနဈနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အောကျခွအေဆငျ့မှ မွို့နယျအဆငျ့ထိ သကျဆိုငျရာ အဆငျ့ဆငျ့ကို အစိုးရဌာနဆိုငျရာအထိ လုပျဆောငျနတေယျလို့ သိရပါ တယျ။
CHDN အဖှဲ့က ကရငျနီပွညျနယျရှိ ကယနျးပွညျသဈပါတီ (KNLP)၊ ကရငျနီလူမြိုးပေါငျးစုံ ပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျဦး (KNPLF)၊ ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ(KNPP)၊ ကရငျနီအမြိုးသား စညျးလုံးညီညှတျရေးအဖှဲ့အစညျး(KNSO)၊ ကယနျး ပွညျသဈတပျ(KNG)၊ ကရငျနီအမြိုးသားငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (KNPDP) အဖှဲ့တှကေနပွေီး စုပေါငျးဖှဲ့ ထားတဲ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ဖွဈပါတယျ။ လှိုငျကျောမွို့နယျ ဆေးရုံတှငျ သံသယလူနာ (၃) ဦး၊ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ ဆေးရုံတှငျ သံသယ လူနာ (၁) ဦးတို့ ထပျမံတကျရောကျစဈဆေးစောငျ့ကွညျ့ခံလကျြရှိတယျလို့ ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာကတဆငျ့ သိရပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72263
Covid-19 လူနာအမှတျ ၆၃ ၏ စကျရုံတှငျအလုပျလုပျရာမှ ပွနျလာပွီး ယခု ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့ မနျခိနျရပျကှကျ တှငျ နထေိုငျသူအား Home Quarantine လုပျထားကွောငျး မနျခိနျအုပျခြုပျရေးမှူးထံမှ သိရသညျ။
“ရနျကုနျကနေ မနျခိနျကို ရောကျတာတော့ ဧပွီ ၂ရကျနေ့ ရောကျတယျလို့ပွောတယျ။ သူ့ပွောတာကတော့ အဲဒီလူနာအမှတျ ၆၃ နဲ့က ထိတှမေူ့ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒါသူတို့စကျရုံက သူတို့ကလုပျသားတဈယောကျ။ ဟိုက သူဌေးပေါ့ အဲလိုပွောတယျ။ ကနြျော တို့ ဆီမှာတော့ ၁၀ ရကျနမှေ့ အကွောငျးလာကွားတာဖွဈတယျ။ သူကိုယျတိုငျကလညျး ဒီလူနာအမှတျ ၆၃ နဲ့ ထိတှခေဲ့တာ မဟုတျ ဘူး။ ကနြျောတို့အနနေဲ့လညျး ပွနျသုံးသပျကွညျ့တော့ သူဌေးနဲ့လုပျသားဆိုတော့ လောလောဆယျအခွနေမှော ထိတှနေို့ငျမယျ့ အခွနေမေရှိနိုငျဘူး။ အဲကွောငျ့ ခုလောလောဆယျတော့ Home Quarantine လုပျထားတာဖွဈတယျ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ မနျခိနျ ကြေးလကျကနျြးမာရေးဘကျကနေ အဖြားတိုငျးတာတှတေော့ နတေို့ငျး လိုလိုလုပျနပေါတယျ။ ဒီနထေိ့တော့ အေးဆေးပါဘဲ။” ဟု မနျခိနျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးလီဆီးဆိုကျ ပွောသညျ။
အဆိုပါ Home Quarantine ပွုလုပျနသေူသညျ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျနသေညျ့အတှကျ ဓါတျခှဲစမျးသပျရနျ အစီစဉျ မရှိသေး ကွောငျးနှငျ့ တဈစုံတဈရာထူးခွားမူရှိလာပါက သကျဆိုငျရာမွို့နယျ ကနျြးမာရေးသို့ အကွောငျးကွားကာ ဆကျလကျ ဆောငျ ရှကျသှားဖို့ စီစဉျထားကွောငျး အုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောသညျ။
“ဧပွီလ ၂ ရကျနေ့ ရောကျတာကို ဘာလို့ ၁၀ ရကျနမှေ့ အကွောငျးသှားကွားတာလဲမသိဘူး။ ရပျကှကျက လူတှကေတော့ ရောကျနတောတဈပတျလောကျရှိနပွေီ ဆိုပွီးတော့ ပွောနကွေတယျ။ ဒီညတော့ ဒီရပျကှကျက လူတှလေညျး အားလုံးလနျ့နေ ကွပွီ။ အဲကွောငျ့မို့လားမသိ ဒီညတော့ Hand Speaker နဲ့လိုကျအျော အိမျထဲမှာနဖေို့ အပွငျမထှကျဖို့လိုကျအျောနကွေပွီ” ဟု မနျခိနျဒသေခံတဈဦး ပွောသညျ။ ထိုသူကို Home Quarantine ကာလပွညျ့ပွီးသျောလညျး နောကျထပျ ၇ ရကျ ထပျမံ စောငျ့ကွညျ့မညျ့အကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/15/%e1%8 0%9c%e1%80%b0%e1%80%94%e180%ac%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့မှာ လူပေါငျးထောငျနဲ့ခြီ လာရောကျအပနျးဖွလေရှေိ့တဲ့ စဈတှကေမျးခွကေို မွို့အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့က ဒီနပေိ့တျလိုကျပွီး ရဲတပျဖှဲ့အငျအားတှကေိုပါ အမြားအပွားခထြားပါတယျ။ အခုလို ပိတျမယျ့အကွောငျး ကမျးခွလြှေောကျ မနကေ့ လှညျ့လညျကွညောခဲ့သလို စားသောကျဆိုငျတှနေဲ့ အခွားဆိုငျတှကေိုပါ အသိပေးခဲ့တာပါ။ စဈတှမွေို့မှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ လူစုလူဝေးမလုပျဖို့ အာဏာပိုငျတှကေ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၁၀ ရကျနကေ့ပငျ အသိပေး ကွငွောထားပမေယျ့ မလိုကျနာတဲ့သူတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနမေ့နကျ ၁၀ နာရီလောကျကပငျ ကမျးခွကေို အခုလိုပိတျလိုကျတာလို့ စဈတှမွေို့မိမွို့ဖအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဦးကိုကိုလေးက ပွောပါတယျ။
ဒီနေ့ ကမျးခွကေိုစတငျပိတျလိုကျတဲ့ ကိစ်စဟာလညျး ဧပွီလ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ အကြုံးဝငျတယျဆိုပမေယျ့ အခွအေနအေရ လိုအပျရငျလိုအပျသလို စညျးကမျးခကျြတှကေို ဆကျလကျဆောငျရှကျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စဈတှမွေို့မှာ မနကေ့အထိ ဆောငျးဘောကျတှဖှေငျ့ပွီး ကားပတျသူအခြို့နဲ့ ကမျးခွမှော လာရောကျ ရကေစားသူတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ ဒီနေ့ မှာ တော့ လူသူကငျးမဲ့သှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ စဈတှမွေို့မိမွို့ဖအဖှဲ့ဝငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ ဦးသနျးရှကေ ကပျရောဂါဘေးကို ကြျောလှားနိုငျဖို့အတှကျ လူထုက ပူးပေါငျးပါဝငျရေးက အရေးကွီးတယျလို့ ပွောပါတယျ။
နှဈဆနျးတဈရကျနမှေ့ာ ဘုရားကြောငျးကနျသှားလရှေိ့တဲ့ ဘာသာရေးကိစ်စတှမှောပါ လူစုလူဝေးတှမေဖွဈရ အောငျနဲ့ ပငျစငျ စားတှအေတှကျ ပငျစငျလစာထုတျပေးရေး ကိစ်စအတှကျပါ ကယျြဝနျးတဲ့ခနျးမတဈခုကို အသုံးပွုပွီး စနဈတကထြုတျပေးဖို့ အထိပါ စီစဉျထားတယျလို့ စဈတှခေရိုငျ အုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောပါတယျ။ စဈတှမွေို့မှာ လကျရှိပွညျပကပွနျလာတဲ့ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီး ၁၇ ဦးကို စောငျ့ကွညျ့နပွေီး လကျရှိအခြိနျအထိတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ မရှိသေးပါဘူး။ https:/ /www.rfa.org/burmese/news/sittwe-beach-close-04152020075142.html
အကွမျးဖကျအဖှဲ့လို့ သတျမှတျထားတဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA နဲ့ ဆကျသှယျခဲ့တာရှိတဲ့အတှကျ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒတှေနေဲ့ တရားစှဲဆိုတာ၊ ဖမျးဆီးတာတှကွေောငျ့ သတငျးမီဒီယာသမား တခြို့ အခုအခြိနျ အထိ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပါတယျ။
အစိုးရက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးလို့ သတျမှတျအပွီး ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ခိုငျသုခကို ဆကျသှယျ မေးမွနျး တဲ့အတှကျ Voice of Myanmar VOM သတငျးဌာန အယျဒီတာခြုပျ ကိုနမြေိုးလငျး၊ ခတျေသဈမီဒီယာ အယျဒီတာ ခြုပျ ကိုသာလှနျဇောငျးထကျနဲ့ နိရိဉ်စရာသတငျးဌာန အယျဒီတာခြုပျ ကိုခိုငျမွတျကြျောတို့ကို ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက အကွမျး ဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမတှနေဲ့ တရားစှဲဆိုထားပါတယျ။ ဒီတရားစှဲခံရတဲ့အထဲက VOM သတငျးဌာန တညျထောငျသူ အယျဒီတာ ကိုနမြေိုးလငျးကို မတျလ ၃၀ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးမှာ ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး ၁၀ ရကျကွာ ထိနျးသိမျးစဈဆေးရာမှာ အကွမျး ဖကျတိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ ငွိစှနျးတာမတှရေလို့ဆိုပွီး ဧပွီလ ၉ ရကျနညေ့ပိုငျးမှာ ပွနျလှတျပေးခဲ့ပါတယျ။ ကိုနမြေိုးလငျး ကို လှတျပေးပွီးနောကျနမှေ့ာဘဲ ပွညျထဲရေးကအမှုဖှငျ့ထားတဲ့ ကနျြတဲ့သူတှကေို အမှုတှရေုပျသိမျးပေးဖို့ စာပို့ထားတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ သတငျးမီဒီယာကောငျစီ အတှငျးရေးမှူး ဦးကြျောစှာမငျး က ပွောပါတယျ။
ကိုနမြေိုးလငျး ကို အမှုနဲ့ မငွိစှနျးဘူးလို့ ဥပဒရေုံးက မှတျခကျြနဲ့ ပွနျလှတျခဲ့ပမေယျ့ AA အဖှဲ့ကို ဆကျသှယျပွီး သတငျးဖျောပွ မှုနဲ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအခွစေိုကျ နိရိဉ်စရာ သတငျးဌာန အယျဒီတာခြုပျ ကိုခိုငျမွတျကြျောနဲ့ ခတျေသဈမီဒီယာ အယျဒီတာခြုပျ ကိုသာလှနျဇောငျးထကျ တို့ကတော့ အခုအခြိနျအထိ တိမျးရှောငျနရေပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ထူးခွားခကျြတခုက ကိုခိုငျမွတျကြျောနဲ့ ကိုသာလှနျဇောငျးထကျတို့ဟာ နိုငျငံတျောသမ်မတက ဖှဲ့စညျးပေးထားတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ သတငျးမီဒီယာ ကောငျစီ ဝငျတှေ ဖွဈပါတယျ။
“မီဒီယာသမားတှရေဲ့ အလုပျလုပျတာဘဲ၊ သတငျးဆိုတာနှဈဖကျအသံပါမှပွညျ့စုံတာ၊ အသံမဲ့နသေူတှရေဲ့ အသံ ဖျောထုတျ ပေးရမှာက ကနြျောတို့တာဝနျပဲလေ၊ ဒါကိုအကွမျးဖကျတိုကျဖကျြရေးဥပဒတေို့ မတရားအသငျး ဥပဒတေို့နဲ့ တရားစှဲတာတှကေ လုံးဝမသငျ့တျောတဲ့ကိစ်စပါ၊မွနျမာနိုငျငံရဲ့သတငျးလှတျလပျခှငျ့ကိုလညျး အဆငျ့နိမျ့စပေါတယျ၊ သူမြားတိုငျးပွညျတှကေ ပွောစရာ ဖွဈပါတယျ၊ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံကိုသှားနတေယျဆိုရငျ ဒီကိစ်စတှကေ လုံးဝကိုမရှိသငျ့ပါဘူးခငျဗြ” သတငျးမီဒီယာသမား တှကေို ပွညျထဲရေးကစှဲဆိုတဲ့ပုဒျမတှဟော သဒေဏျအထိပေးလို့ရတဲ့ပုဒျမတှေ လညျးဖွဈပါတယျ။ မွနျမာပွညျတှငျးမှာတော့ အစိုးရက ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးလို့ကွညောပွီးနောကျပိုငျး AA ကို ဆကျသှယျသတငျးမေးမွနျးခဲ့တဲ့ သတငျး မီဒီယာတှေ၊ သတငျးသမားတှကေို အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ တရားစှဲဆိုအရေးယူမယျဆိုတဲ့ သတငျးစကား တှကွေောငျ့ စိုးရိမျမှုတှေ မွငျ့တကျနပေါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-myanmar-government-journalists–04152020 113910.html
Covid-19 ပိုးတှေ့ လူနာအမှတျ ၈၂ ဖွငျ့ထိတှခေဲ့သော မွဈကွီးနား၊ ခမောသီရိ ရပျကှကျ (၃) မှ အမြိုးသမီး တဈဦးအား ဓါတျခှဲစဈဆေးရနျ ယနေ့ ည ၄ နာရီခြိနျတှငျ ၎င်းငျး၏နအေိမျမှ မွဈကွီးနားဆေးရုံ Quarantine ထားရနျသတျမှတျထား သညျ့ နရောသို့ ပို့ဆောငျထားပွီဖွဈကွောငျး ခမောသီရိအုပျခြုပျရေးမှူး ထံမှသိရသညျ။ အဆိုပါ အမြိုးသမီးသညျ မတျလ ၁၃ ရကျနေ့ တှငျ စငျကာပူမှ တူရကီသို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး တူရကီမှ ရနျကုနျသို့ မတျလ ၂၅ ရကျနေ့ ရောကျရှိကာ ရနျကုနျတှငျ ၁၄ ရကျ Quarantine နခေဲ့ပွီး မွဈကွီးနားမွို့၎င်းငျး၏နအေိမျသို့ ဧပွီလ ၇ ရကျတှငျရောကျရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“သူရောကျနတော ကနြျောတို့ဆီမှာအကွောငျးကွားတာလညျးမရှိဘူး။ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတဈယောကျက လာပွောမှ ကနြျောတို့သိရတာ ပွောတဲ့သူကလညျး လိပျစာအပွညျ့အစုံမသိတော့ ကနြျောတို့မှာရှာလိုကျရတာ။ ခုတော့ အစိုးရ သတျမှတျ ထားတဲ့ Q နရောကို လိုအပျတာတှစေဈဆေးဖို့တှကျ ရောကျရှိနပေါပွီ။” ဟု ခမောသီရိအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရာဂမျြးက ပွောသညျ။
ခမောသီရိရပျကှကျတှငျးရှိ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မိမိ မိသားစုအတှငျး ပွညျတျောပွနျမြားရှိပါက အုပျခြုပျရေးရုံးသို့ အကွောငျး ကွားပေးရနျနှငျ့ အကွောငျးကွားခွငျးမရှိပါက ထိရောကျစှာအရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ ယခု မွဈကွီးနား ဆေးရုံသို့ ဆေးစဈရနျရောကျရှိသူသညျ လူနာအမှတျ ၈၂ နဲ့ ထိတှခေဲ့သူဖွဈသညျ။ https://burmese.ka chinnews.com/2020/04/16/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%94%e1%80%ac%e1%
၂၀။ မွနျမာနှငျ့ဘင်ျဂလားဒရှေျ့၌ ဆကျသှယျရေးနှငျ့မိုဘိုငျးအငျတာနကျ အပွညျ့အဝရရှိရေး ထောကျပံ့ရေးအဖှဲ့ အစညျး ၂၆ ဖှဲ့တောငျးဆို
အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူသားခငျြးစာနာမှု အကူအညီပေးရေးအဂေငျြစီ ၂၆ ဖှဲ့သညျ ဒုက်ခသညျမြား၊ နရေပျစှနျ့ခှါထှကျပွေးသူမြား၊ ကယျဆယျရေးအဖှဲ့အစညျးမြားအတှကျ COVID-19 ကပျရောဂါဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား ရရှိစရေနျနှငျ့ ကူညီ ထောကျပံ့မှုမြားလုပျဆောငျနိုငျရနျအတှကျ ကော့ဈဘဇား၊ ရခိုငျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတို့တှငျ မိုဘိုငျးအငျတာနကျနှငျ့ ဆယျသှယျ ရေး အပွညျ့အဝရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးရနျ မွနျမာနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အစိုးရတို့အား ဒီကနေ့ တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။
ကော့ဈဘဇားဒုက်ခသညျစခနျးမြားတှငျ အမြိုးသမီးမြား၊ ကလေးမြား၊ မသနျမစှမျးနှငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြားအပါအဝငျ ဘင်ျဂါလီ (မူရငျး ရိုဟငျဂြာဟုဖျောပွ) တဈသနျးခနျ့သညျ နရောအကနျ့အသတျဖွငျ့ ကပျြတညျးစှာ နထေိုငျနကွေရသညျ။ နှဈနိုငျငံအကွား ရှိ နယျစပျမြားမှ အဆိုပါ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမြားသညျ လူဦးရသေိပျသညျးခွငျး၊ သနျ့ရှငျးသောရနှေငျ့ ရောဂါကာကှယျရေးဆိုငျ ရာ ပစ်စညျးမြား မလောကျငှခွငျး၊ COVID-19 ရောဂါ စမျးသပျစဈဆေးပေးမညျ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုစနဈမရှိခွငျး စသညျ့ စိနျချေါမှုမြားကိုရငျဆိုငျနကွေရသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ကော့ဈဘဇားတို့တှငျ အသကျရှူစကျမြားလညျးအလုံအလောကျမရှိသညျ့ အခွအေနမြေားကွောငျ့ ရောဂါ ကူးစကျမှုမြား မွနျဆနျပွီး သဆေုံးနှုနျးမွငျ့တကျလာနိုငျဖှယျရှိသညျဟုဆိုသညျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသားမြား ၊ ဘင်ျဂါလီမြားနှငျ့ ရခိုငျလူမြိုးမြားအား COVID-19 ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုမြားမှ ကာကှယျပေးနိုငျရေးအတှကျ လိုအပျသောစီမံခကျြမြား လုပျဆောငျရနျ အရေးကွီးသညျ ဟု အဆိုပါအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။
ရခိုငျနှငျ့ခငျြးပွညျနယျရှိ ပဋိပက်ခဖွဈပှားသညျ့ မွို့နယျ ၉ မွို့တှငျလညျး ၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီလမှ စတငျကာ မိုဘိုငျးအငျတာသုံး စှဲမှု ဖွတျတောကျထားသညျ။ ဆကျသှယျရေး ကောငျးမှနျမှသာ COVID-19 ရောဂါလက်ခဏာရှိနသေူမြားအနဖွေငျ့ မညျသညျ့ အခြိနျ တှငျ မညျသို့ သီးသနျ့ခှဲနရေမညျကို သိမညျဖွဈကာ မိသားစု၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့အားပွုစုစောငျ့ရှောကျနသေူ မြားကို ထိတှကေူ့းစကျမှု လြော့နညျးစမေညျဖွဈကွောငျး၊ အထူးကွပျမတျကုသရနျလိုအပျသူမြားအတှကျ ဆေးရုံမြားသို့ ပို့ဆောငျနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါဒသေမြားသို့ လူသားခငျြးစာနာမှု အထောကျအပံ့မြားလုပျဆောငျရနျ အရေးတကွီးလိုအပျကွောငျး၊ မိုဘိုငျး အငျတာနကျမြားမသုံးစှဲနိုငျပါက လိုအပျသောဝနျဆောငျမှုမြား လုပျဆောငျနိုငျမှာမဟုတျကွောငျး အဆိုပါ အဖှဲ့အစညျးမြားက ထောကျပွပွောဆိုခဲ့ကွသညျ။
ထိုတောငျးဆိုခကျြကို International Rescue Committee၊ World Vision ၊ People in Need Myanmar ၊ Plan International ၊ Save the Children နှငျ့ United Purpose ကဲ့သို့သော အဖှဲ့အစညျးမြားကလညျး ပါဝငျလကျမှတျရေးထိုး ခဲ့ကွသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/articl e/69026
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး မောငျတောဒသေ၌ ARSA အကွမျးဖကျအဖှဲ့၏ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျနှဈဦး ကဆြုံးခဲ့ ကွောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ ဧပွီ ၁၅ ရကျတှငျ ခမောငျးဆိပျကြေးရှာသို့ အရေးကွီးစာလာပို့သညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျလေးဦးကို ယငျး ကြေးရှာမွောကျဘကျ မီတာ ၂၀ဝဝ ခနျ့မှ ARSA အကွမျးဖကျသမား ၃၀ ခနျ့က ပဈခတျသဖွငျ့ နှဈဦးအသကျဆုံးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ဆိုသညျ။
“ARSA အနနေဲ့ အခုနောကျပိုငျးမှာ၊ အစီရငျခံစာ (ICJ သို့ တငျသှငျးရမညျ့အစီရငျခံစာ)တငျခါနီးမှာ ခပျစိပျစိပျလေးလှုပျရှား လာတဲ့သဘောတှရေ့တယျ” ဟု ၎င်းငျးက မှတျခကျြပွုသညျ။ ထို့အပွငျ ဧပွီ ၁၄ ရကျ ညပိုငျးတှငျ မောငျတောဒသေ ဖားဝပျ ခြောငျးအနီး တညျဆောကျရေးဆောငျရှကျနသေညျ့ ဘကျဟိုးယာဉျတဈစီးကို ARSA အကွမျးဖကျအဖှဲ့က မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျခဲ့ ကွောငျး ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ https://7day.news/detail?id=184080
ခငျြးပွညျနယျ၊ ဖလမျးမွို့အနီးမှာ အငျအား ရဈ(ချ)တာစကေး ၄ ဒသမ ၁ အဆငျ့ရှိ အငျအားအနညျးငယျရှိတဲ့ မွငေလငျြတဈခု လှုပျခတျသှားတယျလို့ မိုးဇလဌာနက ထုတျပွနျပါတယျ။
ဧပွီ ၁၆ ရကျ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည ၇ နာရီ၊ ၁၇ မိနဈ၊ ၁၇ စက်ကနျ့ အခြိနျမှာ ဟားခါးမွငေလငျြစခနျးမှ အရှေ့-အရှမွေ့ောကျ ဘကျ ၂၇ မိုငျခနျ့ ကှာဝေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံပွညျတှငျး ဖလမျးမွို့ရဲ့ အရှတေ့ောငျဘကျ ၂၅ မိုငျခနျ့အကှာ မွောကျလတ်တီတှဒျ (၂၂.၇၄) ဒီဂရီ၊ အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ (၉၄.ဝ၂) ဒီဂရီ၊ အနကျ(၃)ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပွုပွီး လှုပျခတျသှားတာလို့ ထုတျပွနျခကျြ မှာဖျောပွပါတယျ။ အလားတူ ဒီနေ့ ညနေ (၆) နာရီ၊ (၁၅) မိနဈ၊ (၂၅) စက်ကနျ့ အခြိနျကလညျး ဟားခါးမွငေလငျြစခနျးမှ အရှေ့-အရှမွေ့ောကျ ဘကျ(၂၇)မိုငျ ခနျ့ကှာဝေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံပွညျတှငျး (ဖလမျးမွို့၏ အရှတေ့ောငျဘကျ(၂၄)မိုငျခနျ့ အကှာ)၊ မွောကျလတ်တီတှဒျ (၂၂.၇၄)ဒီဂရီ၊ အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ (၉၄.ဝ၁)ဒီဂရီ၊ အနကျ(၁၂)ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပွုပွီး အငျအားရဈ(ချ) တာစကေး(၆.၁) အဆငျ့ ရှိ အငျအားပွငျးထနျသော မွငေလငျြတဈခု လှုပျရှားသှားတယျလို့လညျး ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မနကျ ၁၀ နာရီ၊ ၇ မိနဈ၊ ၃၇ စက်ကနျ့လောကျကလညျး ခန်တီးမွို့တောငျဘကျ ၈ မိုငျခနျ့ အကှာမှာ အငျအားရဈ(ချ) တာ စကေး ၃ ဒသမ ၅ အဆငျ့ရှိ အငျအားအနညျးငယျရှိတဲ့ မွငေလငျြတခုလှုပျခတျသှားပါတယျ။ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ ဒီနေ့ တရကျ တညျး မွငေလငျြ ၄ ကွိမျလှုပျခတျသှားတာဖွဈပွီး ငလငျြကွောငျ့ ထိခိုကျပကျြစီးမှု အခွအေနသေတငျးတှကေတော့ မရရှိသေး ပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/382755